YEYINTNGE(CANADA): Thursday, September 22
ညာဏ်ကြီးရှင်တို့အမေးအဖြေ
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ - ရီချင်ရီ မရီချင်နေ- ညာဏ်ကြီးရှင်များရဲ့အဖြေ
ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယပုံမှန် အစည်းအဝေး( ၂၂ ) ရက်နေ့လွှတ်တော်အတွင်းမှာ မေးကြဖြေကြတာတွေ ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ရယ်သောသူသည် အသက်ရှည်၏ လို့ကြားဖူးပါ၏ လွှတ်တော်အတွင်းမှာ မေးတာဖြေတာကို ဖတ်ပြီး အသက်ရှည်မှာ မဖြစ်ဘဲ တိုသွားမယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်အမတ်များသာ တာဝန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
( ၁ ) ကြည့်မြင်တိုင် မဲဆန္ဒနယ်က ဦးသန်းစိန်က မေးပါတယ် /
နိုင်ငံတော် အခြေခံစာသင်ကျောင်းများတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ စာပေသင်ကြားရ၌ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေပါ၍ စာသင်ခုံများ ဖြည့်ဆည့်ပေးမည့် အစီအစဉ်များ ရှိမရှိ သိလိုပါတယ်-တဲ့ 
( ၂ ) ပညာရေးဝန်ကြီး ဦးမြအေးက ဖြေပါတယ်
ယခုပညာသင်နှစ်တွင် ( ၃ ) ယောက်ထိုင်ခုံနှင့် စားပွဲခုံ ( ၂၀၀၀ ) ၊ မူလတန်းအဆင့် ( ၃ ) ယောက်ထိုင်ခုံ နှင့် စားပွဲအရှည် ( ၃၀၀၀ ) တို့ ကို ၀ယ်ယူရန် စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားလိုက်ပါတယ် ။
( တကယ့်နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းနဲ့အဖြေဆိုတာ သိသာနိုင်ပါတယ် )
( ၃ ) မိုးညှင်းမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးစိုင်းသီဟကျော် က မေးပါတယ်
လယ်ယာမြေပေါ်တွင် လုပ်ကိုင်ခွင်နှင့် ပါတ်သက်၍ မိမိတို့နှစ်သက်သော သီးနှံများကို လွပ်လွပ်စွာ ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးခွင့် ထုတ်လုပ်ခွင့်ရှိပါသည်ဆိုသောအပိုဒ်ကို အပိုဒ်ခွဲ့ အဖြစ် ဥပဒေမှာ ဖြည့်စွက်ထည့်သင့်ပါသည်လို့တင်ပြလိုက်တာပါ ။
( ၄ ) ဦးဋ္ဌေးဦးက ဥပဒေမှာမထည့်သင့်ကြောင်း တင်ပြ၍ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာ ဦးစိုင်းသီဟကျော်၏ ပြင်ဆင်ချက်ကို အတည်မပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်-
( တကယ့်လယ်လုပ်သူ လယ်ပိုင်ရေး ဥပဒေအား အကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်နေသူများကို သိသာနိုင်ပါတယ် )
( ၅ ) ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးကျော်ကျော်က မေးပါတယ်
ရခိုင်ပြည့်နယ်တွင် လူငယ်များ အလုပ်အကိုင် ရရှိရေးအတွက် အစီအစဉ်ရှိ မရှိ မေးပါတယ် ။
( ၆ ) အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်က နိုင်ငံတော်သည် အလုပ်လက်မဲ့ပြသနာများကို ညှိနိုင်းနေပြီး တတ်နိုင်သမျှ ကူညီဆောင်ရွက်နေပါတယ် လို့ဖြေကြားလိုက်ပါတယ် --
( တကယ့်လက်ရှိမှာ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေတာကို မေးတော့ အတိတ်ကတည်းက စီစဉ်နေပါတယ် လို့ ဖြေတဲ့ အဖြေကို စဉ်းစားကြည့််စမ်းပါ )
( ၇ ) ပုလောမြို့ နယ်က မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးလှစိုးက မေးပါတယ် ။
ပုလောမြို့ နယ် လမ်းပိုင်းကို ကတ္တရာလမ်း ပြန်ခင်းပေးဖို့တင်ပြပါတယ်တဲ့ -
( ၈ ) တံထားဆိုင်ရာ နဲ့ဆောက်လုပ်ရေးတွေအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခင်အောင်မြင့်က အခုလိုဖြေကြားလိုက်ပါတယ် ။
ပုလောမြို့ နယ်က လမ်းတွေကို သဲအုပ်ခြင်း၊ ကျောက်ဖြည့်ခြင်းစသည့် ထ်ိမ်းသိန်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို လမ်းသွားလာမူ မပြတ်စေရေးအတွက် ပြုလုပ်ပေးသလို တနိုင်ငံလုံးမှာ သဲအုပ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ် တဲ့ -
( ကတ္တရာလမ်း ပျက်နေတာကို သဲအုပ်နေပါတယ်လို့လွှတ်တော်မှာ ဖြေတဲ့ဝန်ကြီး ဥဏှောက် ချီးကြူးစရာပါ )
( ၉ ) ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့ က မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးမောင်အေးထွန်း မေးပါတယ် ။
ဘူးသီးတောင်နဲ့ ညောင်ချောင်းက တံထားလေးစင်းကို လူကူးတံထားပျက်စီးနေတဲ့ အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရှိမရှိမေးတာပါ ။
( ၁၀ ) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းဋ္ဌေးက အခုလို ဖြေကြားလိုက်ပါတယ် ။
ဘူးသီးတောင်မြို့ နယ် ညောင်ချေင်းကျေးရွာ တံထားလေးစင်းကို အစိုးရက ( ၁၅၁ ) သန်းခန့် ကုန်ကျမည်ခန့် မှန်းထားတာမို့စည်ပင်သာယာက ( ၅၇ ) သန်း၊ အစိုးရက ( ၁၇ )
သန်းခန့်စိုက်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် လူထုထံမှ ကုန်ကျငွေများကို ထောက်ပံ့ပေးရမှာလို့ ဖြေကြားသွားပါတယ် ။
( မမေးဘဲနဲ့ဒီအတိုင်း နေလိုက်ရင် လူထုဆီက ငွေကောက်ခံလို့မရနိုင်ပါ၊ ခုတော့ အမေးကောင်းလို့လူထုခမြာ ခံပေတော့ ပေါ့ )
(၁၁ ) ချီဖွေ မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးဇုံးတိန့် က အခုလို မေးမြန်းပါတယ် ။
ဝေးလံသီခေါင်တဲ့နေရပ်ဒေသတွေက ၀န်ထမ်းတွေအတွက် ခရီးစရိတ် သို့ မဟုတ် သွားလာစရိတ်တွေကို အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင် ပေးဖို့အစီအစဉ် ရှိပါသလားလို့ 
( ၁၂ ) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီး ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဝင်းသန်းက အခုလို ဖြေကြားလိုက်ပါတယ် ။
ဝေးလံသီခေါင်တဲ့လူမူရေးခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသမှာ ၀န်ထမ်းတွေကို အခက်အခဲ ရှိပါက လိုအပ်သလို တင်ပြပြီး ပြည်နယ်အစိုးရကတဆင့် တင်ပြလို့ဖြေကြားလိုက်ပါတယ် ၊
တကယ် သနားစရာ ကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်နေလို့ ပါ ၊ )
( ကဲ - သူတို့ ကျတော့ ဝေးလံသီခေါင်တဲ့ နေရာတွေပါတဲ့ ခင်ဗျား - နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကျတော့ သူတို့လွှတ်တော်မှာ ဘာလုပ်ပေးသင့်သလဲ ဆိုတာ
မမေးဖြစ်ကြသလို ဖြေကြားသူလဲ မရှိခဲ့ ကြောင်းပါ )
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 9/22/20110အကြံပြုခြင်း
BHG ကို ဖျက်သိမ်းမည်။
BHG, Blink Hacker Group အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ရရှိရေးနှင့် နည်းပညာထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်အရ ကာလတခုအနေဖြင့် အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီခေတ်သို့ ကူးပြောင်းနေခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ ပိတ်ဆို့ထားသည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို ပြန်လည် ဖွင့်ပေးခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ အင်တာနက်လိုင်းများ မြန်နှုန်းမြင့်လာစေရန် အရင်းအနှီးများစွာမြုပ်နှံ၍ လုပ်ဆောင်နေခြင်းတို့ကြောင့် လည်းကောင်း စသည်တို့ကြောင့် BHG-Blink Hacker Group အား ဖျက်သိမ်းတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ BHG အနေဖြင့် မြန်မာ့အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်တွင်လုပ်ဆောင်နေမှုများကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သော အင်တာနက်စာမျက်နှာ (မည့်သည့်စာမျက်နှာက်ိုမှ) များကိုလည်း တိုက်ခိုက်တော့မည် မဟုတ်ပါ။
BHG အား အစဉ်တစိုက်လက်ခံအားပေးသူများနှင့် နည်းပညာပံ့ပိုးကူညီသူများအား BHG မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပြီး မှတ်တမ်းတင်ကြောင်း ဂါရ၀ပြုနှုတ်ဆက်အပ်ပါသည်။
နောက်နောင်တွင် BHG နှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကိစ္စများကိုလည်း တာဝန်ယူဖြေရှင်းတော့မည် မဟုတ်ဘဲ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် မိမိတို့စွန့်လွှတ်ခဲ့ရသည်များကို ထောက်ထားပြီး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို BHG မှ လေးစားစွာ တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
BHG- Blink Hacker Group
ရေဘေးဒုက္ခကြုံရတဲ့ပြည်သူနဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဆက်ဆံပုံတစ်ခု
ပြည်သူတွေနဲ့ သူတို့တတွေ တစ်သားတည်း၊ ကြမ်းတစ်ပြေးတည်းမထိုင်ကြဘူး။
ဒီတော့ပြည်သူ့ခံစားချက်၊ ပြည်သူ့အသံ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ သူတို့မသိတာ ဘာမျှမဆန်းပါဘူး။
“ပြည်သူ့ဆန္ဒ - လွှတ်တော်ဆန္ဒ”
“ပြည်သူ့မျှော်လင့်ချက်- လွှတ်တော်က ဖော်ဆောင်ရွက်” ဆိုသည့် လွှတ်တော်ဆောင်ပုဒ် ကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်။
“လွှတ်တော်အသံ - ပြည်သူ့အသံ”
“လွှတ်တော်ဆန္ဒ - ပြည်သူ့ဆန္ဒ”
“လွှတ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက် - ပြည်သူများ က ဖော်ဆောင်ရွက်”
22 Sep2011 Yeyintnge's Diary
Aung San Suu Kyi address at CGI conference on youtube
ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ရဲ့​ ​ပြောစကား​ ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်​ဆောင်သလဲ
Published on September 22, 2011 by တိုင်းကျော်
မြန်မာ့​နိုင်ငံ​ရေး​နဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ ဒီတပတ်အတွင်း​ ထူး​ခြား​မှု​တွေ ရှိခဲ့​ပါတယ်။ အဓိကက​တော့​ လူထု​ခေါင်း​ဆောင် အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့​ချုပ် အ​ထွေ​ထွေ အတွင်း​ရေး​မှူး​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ရဲ့​ ​ပြောစကား​တွေ​ကြောင့်​ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတပတ်အတွင်း​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ဟာ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ရေစီ အဖွဲ့​ချုပ်မှာပြုလုပ်တဲ့​ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုက​ရေစီ​နေ့​ အခမ်း​အနား​မှာ အမှာစကား​ တခု ​ပြောခဲ့​ပါတယ်။ ​နောက် ပြည်တွင်း​ထုတ် ဂျာနယ်​တွေနဲ့​ အင်တာဗျူး​လုပ်ခဲ့​ပြီး​ လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်နဲ့​ ရန်ကုန်တိုင်း​မ်ဂျာနယ်မှာ ​ဖော်ပြခွင့်​ရခဲ့​ပြီး​ဖြစ်ပါတယ်။ ​ဒေါ်စုရဲ့​ ​ပြောစကား​တွေနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ တုံ့​ပြန်ကြတာ​တွေနဲ့​ ​ရှေ့​အလား​အလာ​တွေကို ​ဆွေး​နွေး​တင်ပြသွား​မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမိုက​ရေစီ​နေ့​တုန်း​က ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်​ပြောသွား​တဲ့​ စကား​တခွန်း​ဟာ အ​တော်​လေး​ကို ထူး​ခြား​ပါတယ်။ အဲဒီ​နေ့​မှာ ​ဒေါ်စုက မြန်မာနိုင်ငံဟာ အ​ပြောင်း​အလဲဖြစ်နိုင်တဲ့​ အ​ခြေအ​နေကို ​ရောက်ရှိ​နေပြီဖြစ်တယ်လို့​ ​ပြောလိုက်ပါတယ်။ ​ဒေါ်စု​ပြောတဲ့​စကား​ အပြည့်​အစုံက​တော့​ “ကျမတို့​နိုင်ငံဟာ အ​ပြောင်း​အလဲ ဖြစ်နိုင်တဲ့​ အ​ခြေအ​နေမှာ ​ရောက်ရှိ​နေပါပြီ။ အ​ပြောင်း​အလဲ ဖြစ်ပြီလို့​လည်း​ ကျမ မ​ပြောချင်ပါဘူး​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဒါ ကျမ လူသိရှင်ကြား​ ​ပြောပြီး​ဖြစ်ပါတယ်။ အ​ပြောင်း​အလဲ ဖြစ်နိုင်တဲ့​ အ​ခြေအ​နေ ​ရောက်​နေပြီလို့​ ကျမ ယုံကြည်တယ်။ ဒီအ​ပြောင်း​အလဲ​တွေဟာ ပြည်သူအတွက်၊​ တိုင်း​ပြည်အတွက် အ​ကောင်း​ဆုံး​ဖြစ်​အောင်လို့​ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း​နဲ့​ လုပ်မလဲဆိုတာ လူတိုင်း​လူတိုင်း​ဟာ တာဝန်သိသိနဲ့​ ​လေး​လေး​နက်နက် စဉ်း​စား​ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဆိုပြီး​ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်​တော့​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ရဲ့​ ခုလို​ပြောစကား​ဟာ မြန်မာ့​ဒီမိုက​ရေစီအ​ရေး​မှာ သူပါဝင်လှုပ်ရှား​ ဦး​ဆောင်ခဲ့​တဲ့​ ၂၃ နှစ်အတွင်း​ အထူး​ခြား​ဆုံး​ စကား​အဖြစ်​တောင် ​ကောက်ချက်ချကြပါတယ်။
အလား​တူပါပဲ။ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​ စ​နေ​နေ့​ထုတ် လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်နဲ့​ ​တွေ့​ဆုံတဲ့​ အင်တာဗျူး​မှာ ​ဒေါ်စုက “ကျမအ​နေနဲ့​ ​ပြောခဲ့​ပြီး​ပါပြီ။ သမ္မတဦး​သိန်း​စိန်ကို တကယ်ပဲ အပြုသ​ဘော​ဆောင်တဲ့​ အ​ပြောင်း​အလဲကို လိုလား​တယ်လို့​ ယုံကြည်ပါတယ်။ အစိုး​ရအဖွဲ့​ တခုလုံး​က​တော့​ ကျမ မသိဘူး​ပေါ့​နော်“ လို့​ ​ပြောခဲ့​ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ အင်တာဗျူး​မှာပဲ ဆက်ပြီး​ “ဘာမဆို ထာဝရမဟုတ်ပါဘူး​။ အကယ်၍ ဒီလိုအ​ပြောင်း​အလဲ​တွေကို မလိုလား​တဲ့​သူ​တွေ ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း​ ဘာဖြစ်လို့​ အ​ပြောင်း​အလဲ​တွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို နား​လည်​အောင် ကျမတို့​ကြိုး​စား​ကြရမှာပဲ။ အ​ပြောင်း​အလဲ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို တကယ်သ​ဘော​ပေါက် နား​လည်လာတဲ့​အခါကျလို့​ရှိရင်​တော့​ အ​ပြောင်း​အလဲအတွက် အား​လုံး​ဝိုင်း​လုပ်ကြလိမ့်​မယ်လို့​ ကျမယုံကြည်ပါတယ်” ဆိုပြီး​ ထပ်​ပြောခဲ့​ပါတယ်။
နောက်ထပ် အင်္ဂါ​နေ့​ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်း​မ်ဂျာနယ်မှာ​တော့​ လက်ရှိ ဖြစ်ပွား​နေဆဲ တိုင်း​ရင်း​သား​လက်နက်ကိုင်​တွေနဲ့​ ပြဿနာ၊​ ငြိမ်း​ချမ်း​ရေး​ပြဿနာနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ တရား​မျှတမှု​တွေကို အ​ခြေခံတဲ့​ ​တောင်း​ဆိုချက်​တွေကို ဖြစ်​မြောက်​အောင် လုပ်​ပေး​ဖို့​ အား​လုံး​မှာ တာဝန်ရှိတယ်။ ဒီကိစ္စ သိပ် အချိန်ဆွဲလို့​မရဘူး​။ အချိန်ဆွဲလို့​ရှိရင် နိုင်ငံရဲ့​ဒဏ်ရာ​တွေ ပိုကြီး​လာမယ် ဆိုပြီး​ ​ပြောဆိုခဲ့​ပါတယ်။ ​နောက်ပြီး​ လက်ရှိ ​တွေ့​ဆုံ​ဆွေး​နွေး​မှု​တွေနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ အခု ​ဆွေး​နွေး​ပွဲ​တွေဟာ အရင် စစ်အစိုး​ရလက်ထက် ​ဆွေး​နွေး​ပွဲ​တွေနဲ့​ မတူ မယ်မယ်ရရ ​ဆွေး​နွေး​တာ​တွေ ရှိ​ကြောင်း​ ​ဆွေး​နွေး​ပွဲနဲ့​ ပတ်သက်ရင်လည်း​ ​ရေရှည်အချိန်ဆွဲလို့​ ရတဲ့​ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး​ဆိုတာ နှစ်ဘက်စလုံး​က နား​လည်ထား​ကြတယ်ဆိုပြီး​ ​ပြောခဲ့​ပါတယ်။
ဒီတပတ်အတွင်း​ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်​ပြောခဲ့​တဲ့​ စကား​တွေကို ပြန်လည် ခြုံငုံသုံး​သပ်ကြည့်​ရင် ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်က သမ္မတဦး​သိန်း​စိန်ဟာ အ​ပြောင်း​အလဲကို တကယ်လိုလား​တဲ့​သူဖြစ်တယ်လို့​ သူယုံကြည်တယ်။ ဒီယုံကြည်ချက်အ​ပေါ် အ​ခြေခံပြီး​ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အ​ပြောင်း​အလဲဖြစ်နိုင်တဲ့​ အ​ခြေအ​နေမှာ ​ရောက်​နေပြီဆိုတာကို သူယုံကြည်တယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ အစိုး​ရတဖွဲ့​လုံး​ကို​တော့​ သူမ​ပြောနိုင်ဘူး​ဆိုပြီး​ ​ပြောပါတယ်။
ဒီစကား​တွေကို အ​သေအချာ ပြန်စဉ်း​စား​ကြည့်​ရင် လက်ရှိအစိုး​ရဟာ အ​ပြောင်း​အလဲ လုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ဆိုတဲ့​ လမ်း​ဆုံလမ်း​ခွ​ပေါ်မှာ ​ရောက်​နေတယ်ဆိုတာလည်း​ ​ပေါ်လွင်လာပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်က​တော့​ လက်ရှိ အစိုး​ရအဖွဲ့​ထဲမှာ အ​ပြောင်း​အလဲကို လိုလား​တဲ့​သူ​တွေ ရှိသလို မလိုလား​တဲ့​သူ​တွေလည်း​ ရှိတယ်ဆိုတာ နား​လည်နိုင်ပါတယ်။ ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်က​တော့​ အ​ပြောင်း​အလဲကို မလိုလား​တဲ့​သူ​တွေလည်း​ အ​ခြေအ​နေကို နား​လည်လာနိုင်​အောင် ကြိုး​စား​စည်း​ရုံး​ရမယ်လို့​ ဆိုထား​ပါတယ်။
လက်ရှိအ​ခြေအ​နေကိုကြည့်​ရင် တကယ့်​အ​ပြောင်း​အလဲနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြနိုင်စရာ မရှိ​သေး​တာက​တော့​ အမှန်ပါ။ ဥပမာ တိုင်း​ရင်း​သား​ အ​ရေး​ကိစ္စ ​ဖြေရှင်း​နေတဲ့​ အ​ခြေအ​နေ၊​ နိုင်ငံ​ရေး​အကျဉ်း​သား​တွေ လွှတ်​ပေး​ရေး​ကိစ္စ စတာ​တွေက​တော့​ သိသာထင်ရှား​တဲ့​ ကိစ္စ​တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မက အခြား​ ကြည့်​ရှုနိုင်စရာ နမူနာ​တွေလည်း​ အများ​ကြီး​ရှိ​နေပါ​သေး​တယ်။ ဥပမာတခုဆိုရင် လက်ရှိ လွှတ်​တော်ထဲမှာ ​ဆွေး​နွေး​နေတဲ့​ ​အောက်​ခြေ ရပ်ကွက်​ကျေး​ရွာ အုပ်ချုပ်​ရေး​မှူး​တွေ ​ရွေး​ချယ်​ရေး​ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့​ ပတ်သက်ရင် နဂိုက ဖွဲ့​စည်း​ပုံအ​ခြေခံဥပ​ဒေထဲမှာ သက်ဆိုင်ရာ မြို့​နယ်အဆင့်​က​နေ ခန့်​အပ်ရမယ်လို့​ ​ဖော်ပြထား​ပါတယ်။ ဒါကို ပြည်သူလူထုက ​ပြောဆိုလာကြ​တော့​ အာဏာရပါတီဟာ ​ရွေး​ချယ်ထား​တဲ့​ ရပ်မိရပ်ဖ ၅ ဦး​လောက်က ​ရွေး​ပေး​ဖို့​ဆိုတဲ့​ ဥပ​ဒေပြင်ဆင်ချက် မူကြမ်း​ကို တင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်​တော်ထဲမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုး​ပါတီကလွဲရင် ကျန်ပါတီ အား​လုံး​လိုလိုက ​အောက်​ခြေရပ်ကွက် ​ကျေး​ရွာအဆင့်​မှာ အုပ်ချုပ်​ရေး​မှူး​တွေကို ပြည်သူလူထု မဲနဲ့​ ​ရွေး​ချယ်တင်​မြှောက်သင့်​တယ်ဆိုပြီး​ တင်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို လွှတ်​တော်ထဲမှာ ​ဆွေး​နွေး​ခွင့်​တောင် မရပါဘူး​။ ​ပြောရရင် အာဏာရ အစိုး​ရနဲ့​ အဖွဲ့​ဟာ ဒီမိုက​ရေစီအခွင့်​အ​ရေး​ကို ထိပ်ပိုင်း​ နိုင်ငံ​တော် အဆင့်​ အသာထား​လို့​ ​အောက်​ခြေ ရပ်ကွက် ​ကျေး​ရွာ အဆင့်​မှာ​တောင် မ​ပေး​ချင်ဘူး​ ဆိုတာ ​ပေါ်လွင်​နေပါတယ်။
ဒါ​ပေမယ့်​ တဖက်မှာလည်း​ ပြည်သူ​တွေကို နှစ်​ပေါင်း​များ​စွာ ဒုက္ခ​ပေး​ပြီး​ တိုင်း​ပြည်ပုံရိပ်ကိုလည်း​ ပျက်​စေခဲ့​တဲ့​ ကား​တင်သွင်း​ခွင့်​ ပိတ်ပင်ထား​တဲ့​ ပြဿနာကို ရှင်း​လင်း​ဖို့​ ကြိုး​စား​တဲ့​ စက်မှု ၁၊​ ၂ ဝန်ကြီး​ ဦး​စိုး​သိန်း​၊​ ရထား​ဝန်ကြီး​ ဦး​အောင်မင်း​တို့​လို အ​ပြောင်း​အလဲအတွက် တက်တက်ကြွကြွ လုပ်​နေသူ​တွေကလည်း​ ရှိ​နေပါ​သေး​တယ်။
ဒီအတွက် လူထု​ခေါင်း​ဆောင် ​ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ရဲ့​ စကား​တွေကို ပြန်အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင် အ​ပြောင်း​အလဲ ဖြစ်နိုင်တဲ့​ အ​ခြေအ​နေမှာ​ရောက်​နေတယ်။ ဒီအတွက် အ​ပြောင်း​အလဲ လုပ်​နေသူ​တွေရဲ့​ လုပ်ရပ်​တွေကို အား​ပေး​ထောက်ခံပါ။ အ​ပြောင်း​အလဲကို မလိုလား​တဲ့​သူ​တွေလည်း​ အ​ပြောင်း​အလဲ​ကြောင့်​ တိုင်း​ပြည်​ကောင်း​လာမှာကို နား​လည်​အောင် စည်း​ရုံး​သိမ်း​သွင်း​ပါ။ ပြည်သူ​တွေအ​နေနဲ့​ အ​ပြောင်း​အလဲ ဖြစ်လာမှာကို ထိုင်​စောင့်​မ​နေဘဲ ကိုယ်ကျရာ​နေရာက​နေ အ​ပြောင်း​အလဲဖြစ်​အောင် အ​ကောင်အထည်​ဖော် ​ဆောင်ရွက်ပါလို့​ အဓိပ္ပာယ်ရ​ကြောင်း​ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
by San Mon Aung(face book) on Thursday, September 22, 2011 at 9:44am
ယမန်နေ့က နေပြည်တော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ဌာနမှ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများ စိတ်ချမ်းသာစေရန် သတင်းကောင်းတစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သတင်း အပြည့်အစုံမှာ …
မြစ်ဆုံတွင် ဆည်ကြီးဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးပပျောက်သွားလျင်….
၁။ မြစ်အတွင်း ရေနစ်သေဆုံးမှုမျိုးမရှိနိုင်တော့ပါ
၂။ ဟိုဘက်ကမ်းနှင့် ဒီဘက်ကမ်း တံတားမလိုတော့ဘဲ အလွယ်တကူ သွားလာနိုင်တော့မည်။
၃။ ဧရာဝတီမြစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချက်အချာနေရာများကိုဖြတ်သန်းထားပါသဖြင့် ရေများမရှိတော့သော မြစ်နေရာတွင် အဝေးပြေလမ်းသစ်ကြီးကို အလွယ်တကူဖောက်လုပ်နိုင်မည်။
၄။ ရေအောက်မှ သယံဇာတများ ၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ကံကောင်းလျင် ရတနာသိုက်များပါ တွေ့ရှိနိုင်မည်။
၅။ ယခုအခါ တရုတ်ပြည်မှ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးပျောက်သွားလျင် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ကို ဖြတ်ပြီး ပင်လယ်ဝမှနေ တရုတ်ပြည်တွင်ထိ တူးမြောင်းတစ်ခုကို အစားထိုးဖောက်လုပ်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိသည်။
၆။ ထိုတူးမြောင်းသစ်ကြီးဖောက်လုပ်ပြီးသွားပါက နိုင်ငံတကာ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးများ လွယ်လင့်တကူ ဖြတ်သန်းနိုင်ကာ နိုင်ငံတော်အတွက် ဖြတ်သန်းခ အကျိုးအမြတ်များ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၇။ ထိုတူးမြောင်းကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံအမည်ရော တရုတ်နိုင်ငံအမည်ပါပါအောင် ‘ရုတ်မာ’ တူးမြောင်းဟု ယာယီ အမည်ပေးထားပါသည်။
Staire သဘောရေးထားခြင်းသာဖြစ်သည်။ မည်သူကိုမှနစ်နာရန်မရည်ရွယ်ပါ….
ဧရာဝတီ၊ မြန်မာပြည် နဲ့ လိမ်ညာနေတဲ့ နဂါးအနီ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြောက်ဖက်ဖျား၊ ကချင်ပြည်နယ်ကဧရာဝတီမြစ်ကြီးရဲ့ မူလအစမှာ မြစ်ဆုံဆည်ကြီး တည်ဆောက်နေတာကို မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးက အုန်းအုန်းကြွက်ကြွက်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာပြည်သူများရဲ့ အသက်သွေးကြောကြီးပါ၊ တရုတ်ပြည်အတွက် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်တွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တရုတ်အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီများ ဆောက်လုပ်နေကြတဲ့ မြစ်ဆုံဆည်ကြီးဟာ မြန်မာပြည်အတွက် ကြီးမားလှတဲ့ ပြန်ပြင်လို့မရတဲ့ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေမှာပါ၊
အခုအချိန်ကဖြင့် မြန်မာအာဏာပိုင်များအတွက် အပြောင်းအလဲတခုဆီ ရွေ့လျားရမည့် အချိန်ပါပဲ၊ သူတို့ဘယ်လို ရပ်တည်ကြမလဲ၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသံကိုနားထောင်၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒကိုလက်ခံပြီး ဒီမကောင်းဆိုးဝါးစီမံကိန်းကြီးကို ရပ်တန့်ဖို့ ကြိုးစားမှာလား?
ဒါမှမဟုတ် တရုတ်အစိုးရရဲ့အကျိုးစီးပွါးကို ကာကွယ်၊ တရုတ်က ပေးကမ်းနေတဲ့ အထောက်အပံ့တွေကို ဆက်လက်တပ်မက်ပြီး ဆည်ကြီးကို ဆက်ဆောက်စေမှာလား?
ပြည်သူလူထုက ရှေ့က ဖုန်းကွယ်ထားတာတွေကို ဖော်ထုတ်ပြီး အမှန်တရားကို ပို၍ပို၍သိချင်နေချိန်မှာ တွေ့နေရတာကတော့ တရုတ်အာဏာပိုင်များနဲ့ မြန်မာအာဏာပိုင်များ ရဲ့ မစားရ ဝခမန်းပြောနေတဲ့ ဆည်ကြီးကြောင့်ရရှိမည့် အကျိုးစီးပွါးတွေအကြောင်း လိမ်ညာမှုတွေပါပဲ၊
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ လက်အောက်ခံ ဖြစ်စေတော့မှာလား?
(၁) အစော်ကားခံရတဲ့ ကချင်ပြည်သူများ
ဟိုးဝါးဒူးဝါး ဇော်ဂမ် ဆိုတာ မြစ်ကြီးနားမှာနေတဲ့ အများကြည်ညိုလေးစားတဲ့ ကချင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပါ၊ သူက တရုတ်အစိုးရက ဒီဆည်ကြီးတွေ ဆောက်တာမှာ ရယ်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်လို့ အခိုင်အမာ ယုံကြည်ပါတယ်၊ သူက ဒီလိုပြောပါတယ်၊
"ဒီရေကာတာ ကိစ္စက ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခု ရှိတယ် ထင်တယ်။ ပထမ ရည်ရွယ်ချက်က ရေအားလျှပ် စစ်ရဖို့၊ ဒုတိယ ရည်ရွယ်ချက်က တရုတ်ပြည်က မြန်မာပြည်ကို ကြိုးကိုင်ဖို့၊ လုံခြုံရေး ထိန်းချုပ်ဖို့ ရေကာတာကို ဗုံးတလုံး ထောင်ထားသလို လုပ်ထားတာ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ပြည်သူတွေ သေမှာကိုကြောက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ (တရုတ်) ဘာပဲပြောပြော နားထောင်ရတော့မှာပဲ။ ကိုယ့်ပြည်သူတွေ သန်းချီသေဖို့ ကိစ္စဖြစ်သွားပြီ။ စဉ်းစားစရာတွေ တသီတတန်းကြီး ဖြစ်သွားပြီ။ ဒါကြောင့် တော်တော်ကြောက်တယ်။ ငါတို့ အကျိုးကနည်းပြီး၊ သူတို့ အကျိုးကများနေတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လက်မှတ်ထိုး အကြုံပြုခဲ့တယ်။ အရင်ဆုံး လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။ခေါ်ခဲ့ရင်လဲပြောစရာ အများကြီးရှိပါတယ်။"
ဒူးဝါးဇော်ဂမ်ဟာ သူ့ဘဝသက်တမ်းမှာ ဆည်တွေကျိုးပေါက်လို့ မြစ်ကြီးနားမြို့ကြီး ရေလွှမ်းခံရတာ အကြိမ်ကြိမ်ကြုံဖူးခဲ့သူပါ၊ သူအတွက်တော့ မြစ်ကြီးနားမြို့နဲ့ ၁၈မိုင်လောက်အကွာမှာ တည်ရှိမည့် အထပ် ၅၀အဆောက်အအုံတခုလောက်မြင့်မားမည့် မြစ်ဆုံဆည်ကြီးဟာ အချိန်မရွေးပေါက်ကွဲမည့် ဗုံးအကြီးကြီးတခုပါပဲ၊ ကချင်ပြည်သူတွေဟာ ဒီဆည်ကြီးတွေ ငလျင် နဲ့ မိုးသည်းထန်ခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးရန်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ လူသားရဲ့အမှား ချို့ရွင်းချက်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ပြိုကျပျက်ဆီးပြီး သူတို့ရဲ့ မြို့၊ ရွာတွေ ရေလွှမ်းဖျက်ဆီးခံရမှာကို ကြောက်ရွံ့စိတ်နဲ့ ရှင်သန်နေကြရမှာပါ၊
ဒါကြောင့်လဲ ၂၀၀၇ ခုနှစ် မေလမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရ နဲ့ တရုတ်အစိုးရတို့ ကချင်ပြည် နယ်အတွင်းမှာ ဆည်ကြီး ၇ ခုဆောက်ဖို့ သဘောတူလိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြားကြားချင်း ဒူးဝါးဇော်ဂမ်နဲ့ ကခြားကချင်ခေါင်းဆောင် ၁၁ဦးဟာ မြန်မာစစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆီကို စာတစောင် လက်မှတ်ရေးထိုးပေးပို့ပြီး ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်၊
သူတို့ချည်းပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကချင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ကချင်ပြည်သူတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးက ပြည်သူတွေက ဒီဆည်ဆောက်လုပ်ရေးကို ရပ်တန့်ဖို့ တရုတ် နဲ့မြန်မာ အာဏာပိုင်များထံ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုခဲ့၊ တောင်းဆိုနေကြတာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတဲကပါ၊ ဒါပေမည့် တရုတ်အစိုးရကတော့ ဒီအသံတွေကို လုံးလုံးလျားလျားမျက်ကွယ်ပြုပြီး ဆည်တည်ဆောက်ရေးကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ ပိုင်းဖြတ်ထားပုံရပါတယ်၊
စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၁ မှာ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၃/၂၀၁၁)ကို နေပြည်တော်မှာ အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပါတ်သက်နေတဲ့ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပညာရှင်များ၊ တရုတ်အစိုးရ ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များက မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး စာတမ်းတွေ တင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ တရုတ်အစိုးရဘက်က CPI Yunnan International Power Investment Co., Ltd (CPIYN) ရဲ့ ဥက္ကဌ မစ္စတာ လီ (Mr. Li Guanghua) တက်ရောက်ပြီး "ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းဒေသ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ တည်ဆောက်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံလျှပ်စစ်စွမ်းအားလုပ်ငန်းများအတွက် မဟာဗျူဟာကျသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်" (Ayeyawady Basin Hydropower Projects are Strategic Selection for Myanmar Electric Power Industry) လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ စာမျက်နှာ ၃၀ ရှိတဲ့ စာတမ်းတစောင်ကို တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီစာတမ်းမှာ မစ္စတာ လီ က "ကချင်လူမျိုးများသည် မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကို ထောက်ခံကြသည်" လို့ တင်ပြသွားပါတယ်၊ သူက ဒီလိုပြောပါတယ်၊ စီမံကိန်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး လေ့လာသုံးသပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ မတူညီတဲ့ ဘာသာတရား၊ ဘဝ၊ လူမျိုးစု၊ ပညာရေး နောက်ခံအသီးသီးက ဒေသခံပြည်သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ သဘောထားစစ်တမ်းတွေကို ကောက်ခံခဲ့ပါတယ် တဲ့။
အဲဒီစစ်တမ်းတွေအရ သဘောထားပေးသူပေါင်းရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုံးကျော်က ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဟာ ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ ဝင်ငွေမြင့်မားမှုတွေ ဖန်တီးပေးလိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည်ကြပါသတဲ့၊
၆၂ ရာခိုင်နှုံးကျော်က ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဟာ ဒေသတခုလုံးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ စီးပွါးရေးကို သိသိသာသာမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါသတဲ့၊
ပြီးတော့ သဘောထားပေးသူအများစုက နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ထောက်ခံကြပါသတဲ့၊
မလွဲမရှောင်သာ ၁၄ ရာခိုင်နှုံးလောက်က မထောက်ခံကြောင်းပြောရာမှာတောင်မှ မစ္စတာ လီ က အဲဒီလူတွေဟာ စီမံကိန်းဒေသ မြစ်ဆုံကနေ ပထမဆုံး ရွှေ့ပြောင်းပေးရမည့် တန်ဖဲကျေးရွာက ဖြစ်ပြီး ဒီစီမံကိန်း ကောင်းကြောင်းကိုအသေအချာနားမလည်ကြလို့ ဖြစ်တယ်လို့ ဆင်ခြေပေးပါသေးတယ်၊
(၂) မြန်မာပညာရှင်များ၏ကန့်ကွက်ချက်ကို မျက်ကွယ်ပြုခြင်း
မစ္စတာ လီ ကပြောပါသေးတယ်၊ သူတို့ ကုမ္ပဏီဟာ ပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကို အထူးဂရုစိုက်ပါတယ် တဲ့၊ ဒါပေမည့် လက်တွေ့မှာတော့ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အလိုဆန္ဒနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့၊ သူတို့ရဲ့ ဆည်စီမကိန်းကို မထောက်ခံတဲ့၊ မြန်မာပညာရှင်များတင်ပြ တဲ့၊ ပါတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာကို လုံးဝလှစ်လျူရှူထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
သူ့အဆိုအရ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ CPI ကငှါးရမ်းထားတဲ့ တရုတ်၊ မြန်မာ ပညာရှင် အယောက် ၁၀၀ ကျော်ဟာ ဧရာဝတီမြစ်ဖျားက မြစ်ဆုံနေရာတဝိုက်မှာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုတွေ ၆လကျော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် တဲ့၊ မြန်မာပညာရှင်တွေက BANCA လို့ခေါ်တဲ့ Biodiversity And Nature Conservation Association ကဖြစ်ပြီး တရုတ်ပညာရှင်တွေကတော့ CISPDR လို့အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research ကဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီပညာရှင်တွေဟာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးတဲ့နောက် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေကို ၂၀၀၉ ခု ဇွန်လ နဲ့ စက်တင်ဘာလအတွင်း မြစ်ကြီးနား၊ ဝူဟန် နဲ့ အခြားနေရာတွေမှာ အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် တဲ့၊
အဲဒီနောက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လမှာ CISPDR က ဧရာဝတီမြစ်ဖျားက ဆည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် ပါတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လေ့လာသုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာ (Environmental Impact Assessment) (EIA) ကို CPI ထံ တင်ပြပါတယ် တဲ့၊
အဲဒီ CISPDR ကတင်သွင်းတဲ့ EIA က ဆည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကို ပါတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းအကျဉ်းသာရှိလို့ လုပ်သင့်ကြောင်း ထောက်ခံတင်ပြပါသတဲ့၊
ဒါပေမည့် မစ္စတာ လီ က မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေးကို စွန့်လွှတ်ဖို့အကြံပြုတဲ့ မြန်မာပညာရှင်များ BANCA ကတင်ပြတဲ့ EIA ကိုတော့ လုံးဝကိုးကားခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊
အဲဒီ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာပဲ BANCA ရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာထင်လှ ကလဲ စာတမ်းတစောင် တင်သွင်းပါတယ်၊ သူ့စာတမ်းကနေ မစ္စတာ လီ နဲ့မတူတဲ့၊ ပိုပြီးမှန်တဲ့အချက်အလက်တွေကို သိခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတဲ့ ပညာရှင် ၁၀၀ ကျော်ဆိုပေမည့် BANCA က မြန်မာပညာရှင်ပေါင်းက ၈၄ ယောက်ပါဝင်တာမို့ တရုတ်ပညာရှင်များရဲ့ အရေအတွက်က ၃၀ ကျော် ၄၀ လောက်ပဲရှိမယ်လို့ နားလည်ရပါတယ်၊ မြစ်ကြီးနားတဝိုက်က ဆည်ဆောက်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ နေရာများမှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ အချိန် ၇ လ သတ်မှတ်ထားပေမည့် တရုတ်ပညာရှင်များဘက်က အကန့်အသတ်တွေကြောင့် ၂၀၀၉ ခု ဇန္နဝါရီ လလယ်ကနေ ဇွန်လအထိ ၅ လပဲ စစ်ဆေးချိန်ရပါသတဲ့။
ပြီးတော့ BANCA က မြန်မာပညာရှင်များဟာ မြန်မာနဲ့ တရုတ်အစိုးရအကြားချုပ်ဆိုတဲ့ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ နားလည်မှု စာချွန်လွှာများကိုလဲ လေ့လာခွင့် မရရှိခဲ့ပါတဲ့။
ပူးတွဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှု ပြီးတဲ့နောက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ မှာ မြန်မာပညာရှင်များက EIA အစီရင်ခံစာမူကြမ်းကို CPI ထံ တင်ပြခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ခု၊ မတ်လမှာ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာကို CPI ထံ တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်၊
BANCA ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာ မြန်မာပညာရှင်များက တရုတ်အာဏာပိုင်များကို
"မြစ်ဆုံဟာ ကချင်တိုင်းရင်းသားများအတွက်ရော၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အားလုံးအတွက်ပါ အင်မတန်ကြီးမားလှတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကြီး ဖြစ်တာမို့ မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေးကို စွန့်လွှတ်ဖို့"
ပြီးတော့လဲ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ အဆင့်ဆင့်ထပ်ပြီးတည်ဆောက်မည့် အကြီးစား နဲ့ အလတ်စား ဆည်ကြီးများဟာ ဧရာဝတီ မြစ်ကြီးရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှု၊ ရေနေသတ္တဝါများ၊ ဇီဝဗေဒ နဲ့ စိုက်ပျိုးမြေများအပေါ် ဆိုးဝါးတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိမှာဖြစ်တဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးရဲ့ ဘဝတွေကို ကြီးမားစွာ ထိခိုက်စေမှာ သေချာသလောက် ရှိပါတယ်" လို့ ရှင်းပြထားပါတယ်၊
ဒါကြောင့်လဲ BANCA ပညာရှင်များက CPI ကို "မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်လုပ်ရေးကို စွန့်လွှတ်ပြီး ယင်းဆည်ကြီးအစား မြစ်ဆုံရဲ့ အထက်ဖက် မေခနဲ့ မလိခ မြစ်နှစ်စင်းပေါ်က သင့်တော်မည့် နေရာ ၂ခုမှာ အသေးစား ဆည် နှစ်ခုအစားထိုးဆောက်လုပ်ဖို့" အကြံပြုထားပါတယ်၊
မြန်မာပညာရှင်များရဲ့ အစီရင်ခံစာနဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို တရုတ်အာဏာပိုင်များ စိတ်ကြိုက်မတွေ့တာ ထင်ရှားပါတယ်၊ BANCA က အာဏာပိုင်များကို ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများကို အတည်ပြုကြောင်း မဆုံးဖြတ်ခင် သိပံ္ပနည်းကျ လူမှုဘဝထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်ချက်တွေကို အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ လူမှုရေးသိပံ္ပပညာရှင်များနဲ့ ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အကြံပြုသလို ဆည်များဆောက်လုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး အလားအလာတွေကို စီမံကိန်းတွေကို အတည်မပြုခင် သေသေချာချာ မျှမျှတတ သုံးသပ်ဖို့ အလေးအနက်တိုက်တွန်း ထားပါသေးတယ်။
ဒါပေမည့်လဲ မြန်မာပညာရှင်များရဲ့ တာဝန်သိသိတင်ပြမှုတွေကို တရုတ်အာဏာပိုင်များက အလွယ်တကူပဲ အမှိုက်ပုံထဲ လွှတ်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်၊ အဲဒီနောက် သူတို့ရဲ့ တရုတ်ပညာရှင်များက တင်သွင်းတဲ့ မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေးကို ထောက်ခံတဲ့ EIA အစီရင်ခံစာကိုသာ မြန်မာအာဏာပိုင်များထံ တရုတ်ပညာရှင်များနဲ့ မြန်မာပညာရှင်များ ပူးတွဲရေးသားတဲ့ အစီရင်ခံစာအဖြစ်တင်ပြပြီး ဆောက်လုပ်ခွင့်ရယူခဲ့တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ မြစ်ဆုံဆည် နဲ့ တကွ အခြားဆည်ကြီးများကို ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က စပြီး ဆောက်လုပ်နေပါပြီ၊
အလုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ CPI နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ကန်ထရိုက်စာချုပ်အရBANCA ဟာ သူ့ EIA အစီရင်ခံစာကို အများပြည်သူထံ ချပြခွင့်မရှိဘူးလို့ ဒေါက်တာထင်လှ ကပြောပါတယ်၊ ဒါပေမည့်လဲ သူကပဲ ပါတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လေ့လာသုံးသပ်ချက်ဆိုတာ တကြိမ်တခါထဲ လုပ်ပြီး ကျေနပ်ရမည့် ကိစ္စမဟုတ်ပဲ အကြိမ်များစွာ လုပ်ဖို့၊ ပြည်သူလူထု သိနားလည်မှုနဲ့ ပါဝင်မှု၊ လူထုရဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်တယ်လို့ ဆွေးနွေးသွားပါတယ်၊
သူ့ရဲ့ အထင်ရှားဆုံး တိုက်တွန်းချက်ကတော့ အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ နောက်ထပ်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ လေ့လာသုံးသပ်မှုတွေကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ပါ။
(၃) မသေချာတဲ့ အကျိုးအမြတ်များ နဲ့ သေချာတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုများ
တရုတ်၊ မြန်မာ အာဏာပိုင်များက ဆည်ကြီးတွေတည်ဆောက်ပြီးစီးရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကျိုးအမြတ်တွေ အများကြီးရရှိလာလိမ့်မယ် ဆိုပြီး ချဲ့ကားပြောနေကြပါတယ်၊ အဲဒီလို မသေချာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို ထပ်ခါထပ်ခါပြောပြီး လူထုကို စည်းရုံးနေပေမည့် သေချာလှတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြပါတယ်။
မစ္စတာ လီ က ဒီရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကြီးကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွါးရေးဟာ တဟုန်ထိုး ထိုးတက်လာမယ်၊ စီမံကိန်းကြီးတခုလုံးက အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း နှစ်သောင်းကျော်ကုန်ကျမှာမို့ ဒီစီမံကိန်းကြီး ပြီးသွားရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပုံသေပိုင်ဆိုင်မှု (Fixed Assets) ထဲမှာ နောက်ထပ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း နှစ်သောင်း တိုးလာလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းကြီးများပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံက နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မီဂါဝတ် ၂၀၀၀၀ ရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ မီဂါဝတ် ၂၀၀၀ ကို အလကားရမယ်၊ လုပ်ငန်းလည်ပါတ်နေတဲ့ အနှစ် ၅၀ အတွင်းမှာ မြန်မာအစိုးရအတွက် နိုင်ငံခြားငွေအကျိုးအမြတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ငါးသောင်းလေးထောင် ရမယ်၊ လမ်းတွေ၊ တံတားတွေ၊ ငလျင်တိုင်းတာရေးစခန်းတွေအများကြီးလဲ တရုတ်အစိုးရက အခမဲ့ ဆောက်ပေးဦးမယ်၊ အလုပ်အကိုင်တွေအများကြီးလဲ ဖန်တီးပေးမယ်၊ ပြီးတော့ ကန်ထရိုက်စာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်အရ ဒီဆည်ကြီးတွေကို ဆောက်လုပ်ပြီး အနှစ် ၅၀ လည်ပါတ်ပြီးရင် မြန်မာအစိုးရကို အခမဲ့ လွှဲပြောင်းပေးမှာဖြစ်လို့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံက ဒီဆည်ကြီးတွေကို အခမဲ့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ သူပြောသမျှ တွေက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကောင်းတွေချည်းပါပဲ၊
ဒါပေမည့် အဲဒီ အကျိုးအမြတ်တွေဟာ တကယ်ဖြစ်လာဖို့ အတော့်ကို အခွင့်အလမ်းနည်းပါတယ်၊ လက်တွေ့ဘဝမှာ ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ ဆည်ကြီးတွေ ဆောက်ရာမှာ ကုန်ကျစားရိတ်က ခန့်မှန်းတာထက်ပိုများတတ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးကာလက ခန့်မှန်းတာထက် ပိုကြာမြင့်တတ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကလဲ မျှော်လင့်တာထက် ပိုနည်းတတ်တယ် ဆိုတာ နိုင်ငံတကာ ဆည်များရဲ့ အတွေ့အကြုံအရ သိနေရပါတယ်။
လက်တင်အမေရိကတိုက်က အာဂျင်တီးနား နိုင်ငံနဲ့ ပါရာဂွေးနိုင်ငံ နှစ်ခုကြားမှာ ဆောက်ထားတဲ့ ရေခရီတာဆည် ကြီး (The Yacyreta Dam) ကို နမူနာပေးချင်ပါတယ်၊ အဲဒီဆည်ကြီးကို အာဂျင်တီးနားသမ္မတဟောင်း ကာလို့စ်မီနန် (Carlos Menem) က "အလွဲသုံးစားလုပ်မှုများ၏ အထိန်းအမှတ် မှတ်တိုင်ံကြီး" (Monument to Corruption) လို့ အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစားရိတ်က မူလခန့်မှန်းထားတဲ့ ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း နှစ်ထောင့်ခုနှစ်ရာ ထက်အဆများစွာပိုပြီး ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း တစ်သောင်းတစ်ထောင့်ငါးရာ ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်၊ ဆောက်လုပ်ချိန်ကာလကလဲ သတ်မှတ်ထားတာထက် ပိုကြာပြီး ၁၉၈၃ ကစတာ ၁၉၉၄ ကျမှပြီးပါတယ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တနှစ်ကို မီဂါဝတ် ၃၁၀၀ ထုတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတာမို့ မြစ်ဆုံဆည်ရဲ့ တဝက်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမည့် လုပ်ငန်းစတင်လည်ပါတ်တဲ့ ၁၉၉၄ ကစပြီး ဒီနှစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ မျှော်လင့်ထားတဲ့ လျှပ်စစ်ပမာဏရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုံးပဲ နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ နောက်လဲ တိုးလာနိုင်စရာမရှိပဲ ဆက်ပြီး လျော့သွားဖို့ပဲ ရှိပါတယ်၊ ဒါဟာဖြင့် မှန်းချေနဲ့ မကိုက်တတ်တဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး ဆည်ကြီးများရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ နမူနာတခုပါ၊
ဒီဥပမာ နဲ့အခြားသော အတွေ့အကြုံများအရ ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများတာက မြစ်ဆုံဆည်အပါအဝင် ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဆောက်နေတဲ့ ဆည်ကြီးများဟာ ခန့်မှန်းတာထက်ပိုပြီး ကုန်ကျနိုင်တယ်၊ ဆောက်လုပ်ချိန်ကာလလဲ ပိုကြာနိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် လျှပ်စစ်ပမာဏကလဲ ခန့်မှန်းတာထက် နည်းနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် မစ္စတာ လီ ပြောနေတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေဟာ အပြည့်အဝတကယ်ဖြစ်လာဖို့ မသေချာလှပါ၊ နောက်တချက်က ဆည်တွေရဲ့ သက်တမ်းပါ၊ ဆည်တွေအားလုံးမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း (လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်နိုင်စွမ်း) သက်တမ်းရှိပြီး အဲဒီသက်တမ်းဟာ အနှစ် ၅၀ ထက်မပိုနိုင်ပါ။
မြစ်ရဲ့ အဖျားကနေ စီးလာတဲ့ ရေတွေကို ဆည်ကြီး နဲ့ ပိတ်ဆို့ဟန့်တားပြီး ရေလှောင်ကန်ကြီးထဲမှာ စုစည်းထိန်းသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ရေတွေမက ရေနဲ့အတူမျောပါလာတဲ့ နုံးတွေ၊ ရွှံ့တွေပါ ရေလှောင်ကန်ကြီးထဲ ပိတ်မိနေကြတာပါ၊ အဲဒီ နုံးတွေ၊ ရွှံ့တွေ က ရေလှောင်ကန်ကြီးရဲ့ ကြမ်းပြင်မှာ သွားစုပုံကြပါတယ်၊ ရေလှောင်ကန်ရဲ့ ကြမ်းပြင်က ရေထုတ်တံခါးကြီးများရှိတဲ့ အမြင့်ထက်ထက် အများကြီး ပိုနက်တာမို့ ဒီနုံးတွေဟာ ရေတွေလို ရေထုတ်ပေါက်ကနေ မြစ်အောက်ပိုင်းကို စီးမျောနိုင်စွမ်းမရှိပါ၊ ဒီလိုနဲ့ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့ အမျှ ရေလှောင်ကန်ကြမ်းပြင်ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာစုပုံလာတဲ့ နုံးများကြောင့် မြင့်တက်လာပြီး ကန်ထဲမှာ လှောင်ထားနိုင်တဲ့ ရေပမာဏက ပို နည်းလာပါတယ်၊ ရေလှောင်ကန်ထဲ မှာ ရေနည်းတဲ့ အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်နိုင်တဲ့ ပမာဏ လျော့နည်းလာပြီး လုံးဝ ဒါမှမဟုတ် စီးပွါးရေးအရ အကျိုးအမြတ်ရှိအောင် မထုတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ အဲဒီ ဆည်ရဲ့ သက်တမ်းကုန်ပါတယ်။
ဒီတော့ မစ္စတာလီ ပြောသလို အနှစ် ၅၀ ပြီးလို့ တရုတ်အစိုးရက အဲဒီ ဆည်ကြီးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံကို အခမဲ့ လွှဲပေးတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ ရမှာက နုံးတွေ၊ ခြင်တွေပြည့်နေတဲ့ လူလုပ်အမှိုက်ကန်ကြီးတွေပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်၊
မစ္စတာ လီ ကပြောပါသေးတယ်၊အခုလက်ရှိမှာ ကချင်ပြည်နယ်က ဆည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်သမားပေါင်း ၄၈၁၉ ယောက် လုပ်ကိုင်နေကြပြီး အဲဒီအထဲက ၁၄၄၀ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်၊ ဒါပေမည့် ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလုပ်ကိုင်နေရတယ် ဆိုတာတော့ သူကမပြောပါ၊ သူမပြောပေမည့်လဲ အလွယ်တကူမှန်းဆနိုင်ပါတယ်၊ မြေကျင်းတူး၊ ကျောက်ထု၊ အမှိုက်သိမ်း၊ စတဲ့ အခြေခံအလုပ်ကြမ်းတွေပဲ ဖြစ်ပြီး ရမည့်လုပ်အားခကလဲ တရုပ်အလုပ်သမားများထက်အဆမတန်နည်းပါလိမ့်မယ်။
သူပြောမှပဲ သိရတာက အခုအချိန်မှာ တရုတ်အလုပ်သမားပေါင်း သုံးထောင်ကျော်ဟာ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြပြီး အဲဒီအရေအတွက်ဟာ လေးသောင်းအထိ လာမည့်နှစ်များမှာ တိုးလာမယ်လို့ သိရပါတယ်၊ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ စကား၊ ယဉ်ကျေးမှုကို နားမလည်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ သောင်းနဲ့ချီပြီး ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး ကချင်လူမျိုးများရဲ့ အမြတ်တနိုးထားရာ မြစ်ဆုံ၊ အမြဲစိမ်းသစ်တောကြီးတွေ၊ အဘိုးတန် တောင်မြင့်မားကြီးတွေ၊ လှပတဲ့ လွင်ပြင်ကျယ်ကြီးတွေကို ဖျက်ဆီးနေကြတာဟာဖြင့် ဒေသခံ ကချင်ပြည်သူများအတွက် ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှုကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
(၄) မတူညီသော စံနှုံးများ
မစ္စတာ လီ ကပြောပါတယ်၊ သူတို့ တရုတ်အစိုးရက ပြဌန်းထားတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းတွေဟာ (The Chinese Standards) ကမ္ဘာပေါ်မှာ အတင်းကြပ်ဆုံး၊ အဆင့်အတန်းအမြင့်ဆုံး စံချိန်စံညွှန်းများ ဖြစ်တယ်လို့ ဝင့်ကြွားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ တရုတ်အစိုးရဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ စီမံကိန်းရေးဆွဲတာ၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတာက စလို့ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအထိ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ (The Chinese Standards) စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း အတိအကျကျင့်သုံးနေပါတယ် လို့ပြောပါတယ်၊ ဒီတော့ သူပြောသလို တကယ်ဟုတ်၊ မဟုတ် ဆန်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်ပါ၊
၂၀၀၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ တရုတ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကနေ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ဥပဒေ (The Environmental Impact Assessment Law) ကို ပြဋ္ဌန်းခဲ့ပါတယ်၊အဲဒီ ဥပဒေအရ တရုတ်အစိုးရရဲ့ စီးပွါးရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံးဟာ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကြီးများကို အကောင်အထည်မဖော်မီ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (Environmental Impact Assessment) ကို မဖြစ်မနေပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးရင် အဲဒီ သုံးသပ်ချက်အစီရင်ခံစာ (EIA) ကို သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေး ဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Environmental Protection) (MEP) ကိုတင်ပြပြီး ဝန်ကြီးဌာနက လက်ခံအတည်ပြုမှ လုပ်ငန်းများစတင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊
တခါ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ MEP ဝန်ကြီးဌာနက သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ လေ့လာသုံးသပ်ရာမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ပါဝင်မှု အတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ (Provisional Measures for Public Participation in Environmental Impact Assessment) ကိုထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်၊
အဲဒီညွှန်ကြားချက်တွေထဲမှာ EIA အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများလုပ်ရာမှာ လုပ်ငန်းသဘာဝကို လူထုကို အသိပေးရှင်းပြဖို့၊ လူထုရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ဖို့၊ ဘယ်သူတွေပါဝင်သင့်တယ်၊ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေသုံးပြီး လူထုထံရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမယ် (လူထုကြားနာပွဲများ၊ အကြံပြုချက်တောင်းခံခြင်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်တဲ့ စာတမ်းဖတ်ပွဲများ)၊ နဲ့ လူထုရဲ့ အကြံပြုချက်၊ တင်ပြချက်၊ စိုးရိမ်မှုတွေကို EIA အစီရင်ခံစာထဲမှာ ဘယ်လိုပေါင်းစပ်ဖော်ပြရမည် ဆိုတာတွေကို အသေးစိတ်ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
ဆိုတော့ ဒီစံချိန်စံညွှန်း (The Chinese Standards) တွေဟာ မဆိုးဘူးလို့ ယူဆရမှာပါ၊ ဒါပေမည့် အဲဒီ စံချိန်စံညွှန်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက တရုတ်ဆည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများမှာ ကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထား တခုမှမတွေ့ရပါဘူး။
မြန်မာပညာရှင်တွေ ရဲ့ EIA ကို တရုတ်အစိုးရက ချောင်ထိုးထားခဲ့ပြီး မြန်မာပညာရှင်များရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကိုလဲ ဥပေက္ခာပြုခဲ့ပါတယ်၊BANCA ရဲ့ EIA အစီရင်ခံစာတင်မက မြန်မာအစိုးရနဲ့ တရုတ်အစိုးရကြားချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်စာတမ်းတွေ၊ အကျိုးစီးပွါးခွဲဝေရေး သဘောတူညီချက်တွေ၊ စီမံကိန်း အသေးစိတ် တွေကိုလဲ အများပြည်သူမသိရှိအောင် လုပ်ငန်းလျှို့ဝှက်ချက် (Trade Secrets) များအဖြစ်ဖုံးကွယ်ထားကြပါတယ်။
ဆည်ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကြီးများအကြောင်း လူထုကို ကြိုတင်ရှင်းပြတာ၊ လူထုရဲ့အကြံပြုချက်တွေတောင်းခံတာ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွါးရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ တိုင်းရင်းသားအရေး ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာတွေအားလုံး လုပ်ငန်းမစခင်မှာ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
မြန်မာပြည်သူတွေက ကချင်ပြည်နယ်မှာ တရုတ်ဆည်ကြီးတွေ ဆောက်မည့်အကြောင်းကို အစိုးရအာဘော် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာက ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့မှာတရုတ်၊မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်များ နှစ်နိုင်ငံနားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့ သတင်းကို ဖော်ပြတော့မှပဲ ဝိုးတိုးဝါးတား သိကြရတာပါ၊
မဲခေါင်မြစ်ကော်မရှင် (Mekong River Commission) က သတ်မှတ်ထားပါတယ်၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Environmental Impact Assessment (EIA) မှာပါတ်ဝန်းကျင်အကျိုးသက်ရောက်မှု လေ့လာသုံးသပ်ချက် ၁၀ ခုရှိရပါမယ်၊ အဲဒါတွေက
(၁) မြစ်ဝှမ်းနဲ့ မြစ်ညာဒေသ သက်ရှိများတည်ရှိမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်ချက် (Basin and Catchment Ecosystems and Habitats);
(၂) မြစ်ရေစီးဆင်းမှုနှင့် ရေအနက်တိုင်းတာသုံးသပ်ချက် (River Flows and Water Levels);
(၃) ရေလွှမ်းမိုးမှုသဘာဝ သုံးသပ်ချက်၊(Flooding Patterns) ;
(၄) အနိမ့်ပိုင်း ရေမြုပ်ဒေသ သက်ရှိများတည်ရှိမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်ချက်၊(Wetlands Ecosystems and Habitats);
(၅) ဆည်မြောင်းရေသွင်းစနစ် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်၊(Irrigated Agriculture);
(၆) အိမ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် မြစ်ရေသုံးစွဲမှုနှင့် ဆက်နွယ်သော လူဦးရေ တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်ချက်၊(Population Growth in Relation to Domestic and Industrial Water Use);
(၇) ရေ၏အရည်အသွေးဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်ချက် (နုံးမြေလျော့နည်းမှုအပါအဝင်)၊ (Water Quality, including Suspended Sediments);
(၈) မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် ဆားငံရေဝင်ရောက်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်ချက်၊ (Saline Intrusion in River Delta);
(၉) မြစ်ကမ်းပါးများပြိုကျခြင်းနှင့် နုံးများပို့ချခြင်းဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်ချက်၊(Riverbank Erosion and Sedimentation/Channel Erosion); နဲ့
(၁၀) မြစ်ဝှမ်းအနိမ့်ပိုင်းနဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ ရေလွှမ်းမိုးမှု စီမံခံ့ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်ချက်၊ (Flood Management in the Lower Basin and Delta); များဖြစ်ကြပါတယ်။
BANCA နဲ့ တရုတ်ပညာရှင်များ စုံစမ်းတင်ပြခဲ့တဲ့ EIA ဟာ အထက်ဖော်ပြပါ အဆင့်တွေထဲက ပထအဆင့် မြစ်ကြီးနားမြို့အထက် မြစ်ဝှမ်းနဲ့ မြစ်ညာဒေသ သက်ရှိများတည်ရှိမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်ချက် သာဖြစ်ပါတယ်၊ နောက်ထပ်ဆောင်ရွက်ရမည့် လေ့လာသုံးသပ်မှုတွေ အများကြီးကျန်နေပါသေးတယ်၊
မစ္စတာ လီ ကပြောပါတယ်၊ အခုဆိုရင်CPIYN က ဧရာဝတီ မြစ်အောက်ပိုင်းမှာ အထူးလေ့လာမှုတွေ စတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီ တဲ့၊ သူပြောတဲ့ လေ့လာမှုတွေက မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသမှာ မြစ်ရေစီးဆင်းမှု၊ သုံးစွဲမှုအပေါ် သက်ရောက်မှု၊ မြစ်ခွဲ၊ မြစ်လက်တက်များ၏ ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှု၊ မြစ်အောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ သက်ရှိ၊ သက်မဲ့များရဲ့ တည်ရှိမှုအပေါ်သက်ရောက်မှု၊ နဲ့ မြစ်အောက်ပိုင်း ရေအရင်းအမြစ်ခွဲဝေသုံးစွဲမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ကျနေပါပြီ၊ ဒီလေ့လာမှုတွေကို ဆည်ကြီးမဆောက်ခင်ကထဲက လုပ်ရမှာပါ၊ ဒီလေ့လာမှုတွေအားလုံးကို ပေါင်းခြုံပြီး၊ လူထုရဲ့ အသံတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်၊ မျှမျှတတစဉ်းစားပြီးမှ ဆည်ကြီး ဆောက်သင့်၊ မဆောက်သင့် ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။
(၇) အဆုံးအဖြတ်ပေးရမည့် အချိန်ရောက်ပြီ
မြန်မာပြည်သူတွေဟာ အရင်ကလို အမှောင်ထဲမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ သူတို့ဟာ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ မြစ်ဆုံဆည်အပါအဝင် တရုတ်ဆည်ကြီးများ တည်ဆောက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးဆက်တွေကို ကောင်းကောင်းသိမြင်လာကြပါပြီ။
ဒူးဝါး ဇော်ဂမ်အပါအဝင် ကချင်ပြည်သူတွေဟာလဲ သူတို့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကို ကျူးကျော်သူ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဖျက်ဆီးမည့် ရန်က ကာကွယ်ဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြသူတွေပါ၊ မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးက သူတို့ နိုးနိုးကြားကြား၊ သတိရှိရှိ နဲ့ မကန့်ကွက် မတားဆီးကြရင် သူတို့ချစ်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ထာဝရဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်နေကြပါပြီ၊
ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့၊ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊အနာဂတ် ကာလသုံးပါးစလုံးက မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အသက်သွေးကြောကြီးပါ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံက နယူးယောက်မြို့တော်ကြီးလောက် ပမာဏ ရှိတဲ့ ဆည်ကြီးကို ဧရာဝတီ ရဲ့ မူလအစမှာ တည်ဆောက်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ရေကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ခြင်းဟာ မိုင် ၁၃၀၀ ကျော်ရှည်လျားတဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတလျှောက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခရီးသွားလာရေး၊ ကုန်းစည်ပို့ဆောင်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ သက်ရှိသက်မဲ့ တို့ရဲ့ တည်ရှိမှု၊ ရာသီဥတု၊ စီးပွါးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတိုက်ဖျက်ရေး အားလုံးအပေါ်မှာ ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့ သက်ရောက်မှုကြီးတွေ ဖြစ်ပေါ်စေမှာပါ။
ကျနော်တို့ အချိန်မီမတားဆီးနိုင်ခဲ့ရင် နောက်အနှစ် ၂၀ လောက်မှာ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြေပုံပေါ်က ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူအားလုံးက ဧရာဝတီကို ကာကွယ်ရေးဟာ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အမျိုးသားရေးတာဝန်ကြီးတရပ်အဖြစ် သဘောပေါက်နေကြပါပြီ၊
သူတို့အားလုံး အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားအထိန်းအမှတ်၊ အမျိုးသားအမွေအနှစ်၊ အမျိုးသားရတနာ မိခင် ဧရာဝတီကို ကာကွယ်ကြ၊ ကယ်တင်ကြပါလိမ့်မယ်၊
အခုအချိန်ကတော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအတွက် အဆုံးအဖြတ် တခု ပြတ်ပြတ်သားသားချမှတ်ရမည့် အချိန်ပါ၊ လူထုရဲ့ မြစ်ဆုံဆည်ကြီးဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အင်အားပြင်းထန်တဲ့ မကျေနပ်မှု၊ ကန့်ကွက်မှုတွေကို သူတို့ နေ့စဉ်ကြားနေရပါပြီ၊
မြန်မာလူထု ရဲ့ တရုတ်အစိုးရအပေါ်မုန်းတီးမှုတွေ၊ တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်တွေ က တနေ့တခြားပိုကြီးမားလာနေတယ်ဆိုတာကိုလဲ သူတို့ သဘောပေါက်နေကြပါပြီ၊
အစိုးရအဖွဲ့ထဲက ဝန်ကြီးအချို့က သူတို့ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်တာကြောင့်၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို လက်ခံမယ် လို့ အရိပ်အယောင်ပြတာတွေလဲ တွေ့နေရပါပြီ။
တချိန်ထဲမှာ အစိုးရခေါင်းဆောင်အချို့က လူထုအသံကို အရင်ကလိုပဲ မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုပဲ ကန့်ကွက်ပစေ၊ မြစ်ဆုံဆည်ကြီးကို ပြီးအောင်ဆက်ဆောက်မယ်လို့ ကြုံးဝါးနေတာလဲ ကြားနေရပါတယ်။ အဲဒီ ဝန်ကြီးတွေကတော့ တရုတ်အစိုးရငြိုငြင်မှာကို အကြီးအကျယ်စိုးရိမ်တဲ့၊ ဒီစီမံကိန်းကြီးကနေ သူတို့ခံစားနေရတဲ့ ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွါးတွေကို မစွန့်လွှတ်နိုင်ကြတဲ့ လူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်၊
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ လူထုအကျိုးစီးပွါးကို ငဲ့ပြီး၊ လူထုအသံကို နားထောင်ပြီး မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကြီးကို ရပ်တန့်ဖျက်သိမ်းမလား၊ ဒါမှမဟုတ် တရုတ်အစိုးရရဲ့ အကျိုးစီးပွါးကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီး၊ တရုတ်အစိုးရရဲ့ လက်အောက်ခံဘဝမှာ ဆက်လက်ပျော်မွေ့ပြီး မြစ်ဆုံဆည်ကြီးကို ဆက်ဆောက်မှာလား၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတခုကို ပြတ်ပြတ်သားသားချရမည့် အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ၊
လူထုရဲ့ အကျိုးစီးပွါးကို ဆန့်ကျင်နေသမျှ၊ လူထုရဲ့ ဆန္ဒကို မလေးစားသမျှ၊ လူထုရဲ့ ဒေါသနဲ့ တုန့်ပြန်မှု၊ စိမ်ခေါ်မှုကို သူတို့ရင်ဆိုင်ရမှာပါ၊ ဧရာဝတီ တော်လှန်ရေး စနေပါပြီ၊
ဒီဆောင်းပါးအတွက် အောက်ပါစာတမ်း၊ စာအုပ်များကို ကိုးကားပါတယ်၊
(၁) Ayeyawady Basin Hydropower Projects are Strategic Selection for Myanmar Electric Power Industry, by Mr. Li Guanghau, CPI Yunnan Intenational Power Investment Co., Ltd (CPIYN), September 2011
(၂) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပါတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ဒေါက်တာထင်လှ၊ ဥက္ကဌ၊ Biodiversity and Nature Conservation Association (BANCA), September 2011
(၃) Environmental Impact Assessment (Special Investigation) On Hydropower Development of Ayeyawady River Basin above Myitkyina, Kachin State, Myanmar, by Biodiversity And Nature Conservation Association (BANCA), October 2009
(၄) The New Great Wall, A Guide to China’s Overseas Dam Industry, by International Rivers Network, July 2008
(၅) ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌကြီး လရော်ဇောင်ဟရာ မှ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အကြီးအကဲ ဟူဂျင်တောင် ထံပေးသောစာ နှင့် ပူးတွဲပါ အထောက်အထားများ၊ မတ် ၁၆၊ ၂၀၁၁
ဗွီအိုအေသတင်းထောက် မြန်မာပြည်သွား တောလား
ဗုဒ္ဓဟူး, 21 စက်တင်ဘာ 2011
ဒီတပတ် မျက်မှောက်ရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ ဦးကျော်ဇံသာ က မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်သတင်းယူခွင့် ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဗွီအိုအေဝိုင်းတော်သူ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ကို သူတွေ့ကြုံမြင်တွေ့၊ ကြားသိခဲ့ရတာတွေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဗွီအိုအေ ဝိုင်းတော်သူ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းခင်များ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ သတင်းသမားတွေအတွက် ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုးတက်မှုအရိပ်အရောင်ကို တွေ့နေရတယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့ လူတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ အပြင်က ကြားသိရတာကတော့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပေးတယ်။ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ကို ဖိတ်တာကို ကြည့်လိုက်ရင် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် ရှေ့ ပြေးပဲ ကောင်းတဲ့နိမိတ် အလားအလာတခုလို့ လူတွေက ဆိုနေကြပါတယ်။ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ရဲ့  မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တိုးတက်မှုအရိပ်အရောင်တွေ ဘာတွေတွေ့ခဲ့ရသလဲဆိုတာကို ပြောပါ။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ။ ။ ကျမကို ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာပေးလိုက်တာကတော့ ကျမအထင်မှာ ပြောရရင်တော့ အမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ် Derek Mitchell ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ ဗွီအိုအေသတင်းဌာနက သတင်းထောက်တဦးကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ပေးခြင်းအားဖြင့် မြန်မာပြည်မှာတော့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေ ပေးလိုက်ပါပြီဆိုတာကို အမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ်ကို သူတို့ သတင်းစကား ပါးချင်တဲ့အနေနဲ့ ပေးလိုက်တယ်လို့ ကျမမြင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ တခြား သတင်းဌာနတွေကိုလည်း ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းနဲ့အတူ မပေးဘူးလား။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ။ ။ ကျမ သိရသလောက်တော့ Derek Mitchell ခရီးစဉ်မှာ ကျမတယောက်ကိုပဲ သတင်းထောက်အနေနဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တခြား သတင်းဌာနတွေကို ပေးတယ်လို့ မကြားမိပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အဲဒီတော့ လက်တွေ့ တွေ့ခဲ့ရတာကို ဆက်ပြောပါအုံး။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ။ ။ သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျမအမြင်မှာတော့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေ၊ ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်တွေမှာတော့ နည်းနည်းပါးပါး အထိုက်အလျောက် လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျမတို့ အရင်တုန်းက မတွေ့ရတဲ့ ဂျာနယ်တွေ ထွက်ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းတွေ ဖော်ပြခွင့်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် မရှိဘူး၊ ရှိတယ်ဆိုတာကို ကျမအနေနဲ့ အကဲဖြတ် ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဥပမာ ကျမကို မီဒီယာ သတင်းယူခွင့်ပြုတယ်ဆိုပြီး တရားဝင် စာရွက်စာတမ်းနဲ့ ကျမကို ခွင့်ပြုထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျမ တကယ်တမ်း သတင်းသွားယူတဲ့အခါမှာ ဥပမာ လေဆိပ်မှာ Derek Mitchell ပြန်မယ့်နေ့မှာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါတယ်။ လုပ်တဲ့အခါမှာ ကျမလည်း stand-up အပြင်ကနေ ရုပ်မြင်သံကြားအတွက် သတင်းရိုက်ချင်လို့ဆိုပြီး လေဆိပ်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ သတင်းရိုက်ဖို့အတွက် လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကျမတို့ကို လုံခြုံရေးကလာပြီးတော့ ဒီနေရာမှာ မရိုက်ရဘူးလို့ လာပြောပါတယ်။ ကျမတို့က MRTV-4 ကလည်း ဒီနေရာလေးမှာ ရိုက်သွားတယ်။ ကျမတို့လည်း ဒီနေရာလေးက အကွက်အကွင်းကောင်းလို့ ရိုက်ပါရစေလို့ ပြောတော့ သူတို့က ဒီမှာရိုက်ခွင့်မရှိပါဘူး၊ လုံခြုံရေးအရ နှင်ထုတ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အထက်ကနေ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရှိတယ်လို့ ပေးလိုက်ပေမယ့် အောက်ခြေကလူတွေ နားမလည်းတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆင့်ဆင့် coordination, cooperation ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နဲ့ ညှိနှိုင်းမှုမှာ အားနည်းနေသေးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ဆိုတဲ့နေရာမှာ အစိုးရကို ဝေဖန်တဲ့ သတင်းမျိုးတွေ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေမှာ ရေးသားခွင့်ရတာကို တွေ့ခဲ့ရပါသလား။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ။ ။ အစိုးရကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်တဲ့ သတင်းတခုပဲ တွေ့ခဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စွမ်းအင်ဝန်ကြီးပြောဆိုချက်ကို ဝိုင်းဝေဖန်ကြတဲ့စာလေးကို ထည့်ထားတာ တွေ့ရတော့ ဒါက အထိုက်အလျောက်လျော့သွားပြီလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါက နမူနာတခုပေါ့။ အဲဒါလေးတော့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဒါက သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အပိုင်းပေါ့။ ကျန်တဲ့ စီးပွားရေးလိုင်းကို ကြည့်ရအောင်ပါ။ ပထမဦးဆုံး အဆောက်အအုံတွေက ဘယ်လိုပြောင်းလဲ တိုးတက်နေပါသလဲ။ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးက စည်းစည်းကားကား၊ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဖြစ်နေပါသလား။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ။ ။ ကျမကတော့ အမေရိက က လာလို့လား။ နိုင်ငံခြားမှာ အနေကြာလို့လားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးကို ကြည့်ရတာ အတော်ကြီးကို ဘယ်လိုခေါ်မလဲ - လမ်းတွေကလည်း တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အနံအသက်တွေကလည်း အတော်ဆိုးပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးက သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ တော်တော်လေး လိုအပ်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နောက် လေထုညစ်ညမ်းမှုကလည်း တော်တော်လေး များပါတယ်။ မော်တော်ကားတွေကလည်း တော်တော်လေး စုတ်ပျက်တဲ့အတွက်ကြောင့် မော်တော်ကားက ထွက်လာတဲ့ အငွေ့တွေ။ လူတွေကို ကြည့်ရတာလည်း တော်တော်များများ ကျမအမြင်မှာ ညိုးနွမ်းပြီး နွမ်းနှယ်မွန်ကြပ်နေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ နောက် ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာခြားမှုကလည်း အရမ်းကို များလွန်အားကြီးပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့လူတွေက မတရားချမ်းသာပြီ၊ ဆင်းရဲတဲ့လူတွေက ကုန်ကောက်စရာ မရှိလောက်အောင် ဖြစ်နေတယ်လို့ ကျမစိတ်ထဲမှာ ခံစားရပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နေပြည်တော်ကြတော့ကော။ ရန်ကုန်နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင်။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ။ ။ နေပြည်တော်ကြတော့ ရယ်စရာပဲ ပြောရမလား မသိဘူး။ လူမရှိတဲ့ နေရာမှာ။ လူလည်းမရှိဘူး။ ကားလမ်းမရှိတဲ့ နေရာမှာ ကားလမ်းမကြီးက တခါမှ ကျမတသက်နဲ့တကိုယ် မမြင်ဘူးပါဘူး။ တဖက်ကို ရှစ်လမ်းသွားဆိုတော့ ဆယ့်ခြောက်လမ်းသွား လမ်းမကြီးက ဖြူးနေအောင် လုပ်ထားတာပါ။ လေယာဉ်ပျံတောင် ဆင်းလို့ရတဲ့ လမ်းမကြီးတွေပါ။ အဲဒီမှာ လူတယောက်မှလည်း မရှိဘူး။ လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းတွေကလည်း တော်တော်ကြီးကို ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီ ပလက်ဖောင်းမှာ လူတယောက်မှ မရှိဘူး။ ကျမ အဲဒီ ပလက်ဖောင်း၊ လမ်းမကြီးတွေကို ရန်ကုန်မြို့ ကို ယူပြီးသွားချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ရန်ကုန်မြို့ က လူတွေကြည့်ရတာ တော်တော်ကြီးကို လိုအပ်နေတယ်။ အဲဒီပစ္စည်းတွေကို။ နောက် မီးတွေ၊ ရေတွေ ကောင်းတာအစ၊ အင်တာနက် အဆက်အသွယ် အကုန်လုံး ရန်ကုန်မြို့ မှာ မရတဲ့ဟာတွေ အကုန်လုံး facilities တွေ အခွင့်အရေးတွေ အကုန်လုံး။ အကုန်လုံးက နေပြည်တော်မှာ ရနေတယ်ဆိုတော့ နေပြည်တော်မှာက လူမရှိဘူး။ လူမရှိသလောက်ပဲ။ မြင်ကိုမမြင်ရသလောက်ပဲ။ လူဆိုလို့ မမြင်ရသလောက်ပဲ။ ကားလည်း မရှိသလောက်ပဲ။ လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ ဝန်ကြီးတွေလောက်ပဲ နေတယ်ထင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ကြီးကတော့ တော်တော်ကြီးကို စုတ်ပျက်နေတယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နေပြည်တော်ဆိုလို့ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက ၂၀၁၄ မှာ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ လုပ်မယ်ဆိုတော့ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်နဲ့ နေပြည်တော်မှာ လက်ခံကျင်းပရမှာပေါ့။ အကယ်၍ လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ။ ။ ကျမလည်း အဲဒီလိုပဲ မြင်ပါတယ်။ သူတို့ တော်တော်လေး ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ Logistically အရ အပြင်ဖက်က ဥပမာအားဖြင့် အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေ လာလို့ရှိရင် နေဖို့အိမ်ကအစ အဆင်သင့်။ ဆယ်နိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တွေနေဖို့ ဟိုတယ်တိုင်းမှာ အိမ်အကြီးတွေ ဆောက်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျမမေးကြည့်တယ် - အဲဒီ အိမ်အကြီးကြီးတွေက ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ ‘နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ လာလို့ရှိရင် တည်ဖို့အတွက်ကို ဟိုတယ်တိုင်းမှာ ဆောက်ထားတာရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။’ ကျမတည်တဲ့ ဟိုတယ်မှာလည်း အဲဒီ အိမ်အမျိုးအစား အိမ်အကြီးကြီးတလုံး တွေ့ပါတယ်။ အဲဒါလည်း ရေမီးအပြည့်အစုံနဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက် နေလို့ရအောင် ဆောက်ထားတာ။ သားသားနားနား ဆောက်ထားတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ တခုပဲ သတင်းမီဒီယာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီလိုမျိုး ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူတို့ သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့ကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာကို တော်တော်လေး သိချင်နေပါတယ်။ ကျမတို့ ဒီတခေါက်သွားတဲ့အခါမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ ကျင်းပဖို့ ဖိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကျမအပါအဝင် ပြည်ပသတင်းဌာနက အားလုံး ခြောက်ယောက်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီ ခြောက်ယောက်လောက်ကို သူတို့ မကိုင်တွယ်တက်ပါဘူး။ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမှန်းလည်း မသိဘူး။ ခြောက်ယောက်လောက်ကို ဘယ်နေရာမှာ ထားရမှန်းမသိတော့ ၂၀၁၄ မှာ ထောင်နဲ့ချီပြီးလာမယ့် သတင်းယူမယ့်၊ သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့ကို သူတို့ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတခု ကျမ သိပ်သိချင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရော လုပ်ဖြစ်မလား။ ဆိုတာကတော့ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ မဖြစ်သင့်သေးဘူးလို့ တွက်တဲ့လူတွေ ရှိသလို၊ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ တွက်တယ်လူတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတာ အပြင်ကလည်း ကြားနေရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။ ဆိုတော့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့လည်း တွေ့ခဲ့မေးမြန်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့  သဘောထားက ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ တိုင်းပြည်က တကယ်ပဲ ပွင့်လင်းတော့မယ်လို့ မြင်နေပါသလား။ အပြောင်းအလဲ တကယ်ကြုံရတော့မယ်လို့ မျှော်လင့်နေပါသလား။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ။ ။ နိုင်ငံရေးသမားတိုင်းလည်း အကုန်လုံးကတော့ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျမ အများစုနဲ့ စကားပြောကြည့်တဲ့အခါကြတော့ အများစုကတော့ အပြောင်းအလဲ နည်းနည်းတော့ လမ်းစပေါ်လာပြီ။ တံခါးလေး နည်းနည်းပွင့်လာပြီ။ ဟတယ်ဆိုရုံပေါ့။ လုံးဝတော့ မပွင့်သေးဘူး။ ဟတယ်ဆိုရုံ ရောင်ခြည်လေးက ဝင်လာပြီလို့ အများစုက ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရင်တုန်းကလည်း ခဏခဏ ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ ခဲမှန်ဘူးတဲ့ စာသူငယ်လိုပဲ သူတို့တတွေအားလုံးက ပြန်ပိတ်သွားလေးမလား ဆိုပြီး မချင့်မရဲ ဖြစ်နေတယ်လူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ စီးပွားရေး အသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ရော - အခုအခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး ပိုမိုပွင့်လင်းလာတယ်။ ဒီနေ့ပဲ ဟိုမှာ ကားအဟောင်းတွေကို သူတို့ ပြန်လက်ခံတယ်။ နောက် နိုင်ငံခြားငွေ စုဆောင်းထားနိုင်တဲ့ လူတွေကို ကားသွင်းခွင့်ပေးမယ်။ ဒေါ်လာဈေးလည်း နည်းနည်းလေး တက်ရိပ်ပြလာတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း သွားတုန်းကရော စီးပွားရေးအလားအလာ ဘယ်လိုမြင်ခဲ့ပါသလဲ။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ။ ။ အဲဒါကိုလည်း ကျမပြောပြပါမယ်။ ဒီလိုရှိပါတယ်။ အခု ဧရာဝတီမြစ်ဆုံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တော်တော်များများ ဝိုင်းဝေဖန်နေကြတဲ့အခါမှာ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံကိစ္စကို လမ်းကြောင်းလွှဲ အာရုံပြောင်းတဲ့အနေနဲ့ ဒီကားကိစ္စကို လုပ်တယ်ဆိုပြီတော့ တချို့ ဝေဖန်သံတွေကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ကြားခဲ့ရပါတယ်။ လူတွေက ကားကိစ္စလို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံကိစ္စ နည်းနည်းလေးများ အသံစဲသွားမလေးလားဆိုပြီးတော့ အာရုံလွှဲတယ်ဆိုပြီး တော်တော်များများ ပြောကြပါတယ်။ ကားပွဲစားတချို့ နဲ့လည်း စကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဒီကိစ္စကတော့ အာရုံလွှဲတာ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး ပြောကြတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့  ကားသွင်းတဲ့ ပါမစ်ကိစ္စတို့ ဘာတို့ ရှိသမျှ ကိစ္စတွေအကုန်လုံးက အရင်တုန်းက လူတယောက်က လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားပြီ၊ ကားပါမစ်တွေကို ကိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီလိုမျိုး ကားတွေက စုတ်ပျက်ပြီး ကားအသစ်တွေ သွင်းလို့မရ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုကြမှ မြစ်ဆုံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာရုံလွှဲရအောင် လုပ်တယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ မြစ်ဆုံဆိုလို့ မြစ်ဆုံကိစ္စကို ဒီက အစီအစဉ်တွေလုပ်တယ်။ သောတရှင်တွေ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြတယ်။ သူတို့တွေက ကန့်ကွက်တဲ့လူတွေ များပါတယ်။ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း တွေ့ခဲ့ရတဲ့ လူတွေအထဲမှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းက ကောင်းတယ်။ လျှပ်စစ်မီး ထိန်းထိန်းလင်းတော့မှာ ဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံခြားငွေလည်း ရတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီ ကြိုဆိုတဲ့လူများ တွေ့ခဲ့မိပါသလား။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ။ ။ အင်မတန် ထူးဆန်းပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနေ့ ပြီးတဲ့အခါမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပပါတယ်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကော်မတီအသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေက ဖြေပါတယ်။ ၁၂ ဦးက - အဲဒီအထဲမှာ ကချင်ပြည်နယ် အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ် တဦးပါပါတယ်။ နံမည်တော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ အဲဒီ ကချင်အမျိုးသမီး လွှတ်တော်အမတ်က ပြောပါတယ်။ သူတို့ ကချင်လူမျိုးတွေလောက် ဒီ မြစ်ကြီးနား ဒေသခံတွေလောက် မြစ်ဆုံကို ချစ်တဲ့လူ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကြီးက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းကျိုးတွေ သယ်ပို့ပေးမယ်ဆိုရင် သူတို့ အနစ်နာခံဖို့ ဝန်မလေးပါဘူးဆိုပြီး အဲဒီ ကချင်ကိုယ်စားလှယ်က ပြောသွားတာကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ အင်မတန်မှ ထူးဆန်းပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ ဒီ စီမံကိန်းကို လိုလားကြိုဆိုတဲ့လူတွေ မတွေ့ခဲ့ဘူးလား။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ။ ။ ကျမ အများကြီး တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ တွေ့တဲ့လူတိုင်းမှာ ထောက်ခံတဲ့လူဆိုလို့ ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦး တယောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နောက် ဝန်ကြီးဦးဇော်မင်း လည်း ထောက်ခံမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ။ ။ ဝန်ကြီးဦးဇော်မင်းကတော့ ကိုယ်တိုင် မတွေ့ခဲ့ရလို့ပါ။ ဦးဌေးဦးကတော့ ကျမတို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ သူကတော့ နိုင်ငံကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုရင် ဒါက လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စတခုသဘောမျိုးနဲ့ ပြောပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ စောစောက ပြောတဲ့အထဲမှာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ အပြောင်းအလဲကို လိုလားတဲ့လူရှိသလို။ အပြောင်းအလဲကို မလိုလားတဲ့လူတွေလည်း သတိထားမိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ နှစ်မျိုးကို ခွဲပြောပါ။ ဘယ်သူတွေက အပြောင်းအလဲကို မလိုလားတာလဲ။ ဘာကြောင့်လဲ။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ။ ။ အပြောင်းအလဲကို မလိုလားဘူးဆိုတာထက် သတင်းမီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီတော့ လွှတ်တော်နှစ်ရပ် ရှိပါတယ်။ လွှတ်တော် နှစ်ရပ်မှာ အဲဒီနေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်အပိုင်းနဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်အပိုင်း နှစ်ပိုင်း ရှိပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အပိုင်းက ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ သူရဦးရွှေမန်းက သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါကြရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဖို့ ။ နိုင်ငံတကာ ဒီမိုကရေစီနေ့ မတိုင်ခင် တစ်ရက်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ အမတ်တွေကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။ သူကနေ မနက်ဖြန်ကြရင် ခင်များတို့ မီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့မယ်။ ပြည်ပသတင်းဌာနတွေ လာမယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုနိုင်တယ်။ ပြောချင်တာတွေ ရင်ထဲက ရှိတာတွေ အကုန်ပြောလို့ရတယ်လို့ ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ခွင့်ပေးပြီး နောက်တရက် ကျမတို့ ရောက်တဲ့နေ့မှာ ကြိုက်တဲ့လူကို မေးလို့ရတယ်ဆိုပြီး အကုန်လုံးက လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာတော့ ဓါတ်ပုံတော့ ရိုက်ခွင့်ရှိတယ်။ ဗွီဒီယို ရိုက်ခွင့်ရှိတယ်။ မမေးရဘူးဆိုပြီး တားမြစ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါမျိုး အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် လွှတ်တော်အတွင်းမှာပဲ နှစ်ခုက မတူပါဘူး။ ဒါကတော့ သတင်းမီဒီယာနဲ့ ပတ်သက်တာပေါ့။ တခြား အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောကွဲလွှဲတာတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကြားခဲ့ရပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ လူထုရဲ့  ညဉ်းတွားသံတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြားရပါတယ်။ ကျနော် သွားတုန်းကလည်း - အခု ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း လူထုဆီက ကြားသိခဲ့ရတဲ့ ညဉ်းတွားသံထဲမှာ အပြင်းထန်ဆုံးက ဘယ်အသံလဲ။ ကုန်ဈေးနှုန်း တက်တဲ့ဟာလား။ လွတ်လပ်မှု မရှိတာလား။ အဲဒါမျိုးတွေ။
ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း ။ ။ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်တာကို သူတို့ ခါးစီးပြီး ခံနေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လွတ်လပ်မှုမရှိတာကတော့ နံပါတ် တစ်ပါပဲ။ ဥပမာ ကျမအသိတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ လာပြီး တွေ့ချင်ကြတယ်။ ဝန်ထမ်းဖြစ်နေတဲ့ လူတွေဆိုရင် တယ်လီဖုန်းနဲ့ပဲ နှုတ်ဆက်ရဲတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ လာမတွေ့ရဲဘူး။ ဗွီအိုအေကဆိုတော့ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံရမှာ ကြောက်တယ်ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ ကြောက်လည်းကြောက်လောက်ပါတယ်။ ကျမ ဟိုတယ်အောက်မှာ ဓါတ်ပုံစောင့်ရိုက်နေသူတွေ ရှိနေတယ်။ ဆိုတော့ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဒါက အသေးအဖွဲပါ။ တခြား လုပ်လို့မရတဲ့ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ရှိသေးတာကတော့ အမှန်ပါ။ နောက်ပြီတော့ စီးပွားရေး ပိတ်စို့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုကတော့ နစ်နာနေပြီဆိုပြီး များသောအားဖြင့် ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူလူထုက ဘာပြောသလဲဆိုတော့ စီးပွားရေးပိတ်စို့တာ ပြည်သူလူထု မနစ်နာဘူး။ သူတို့ပဲ နစ်နာတာ။ စီးပွားရေးကို ဖွင့်ပေးလိုက်ရင် ပြည်သူလူထု ခံစားရမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့နဲ့ ပလဲနံပတ်တဲ့ လက်တစုပ်စာ လူတန်းစားပဲ ကောင်းစားမှာတဲ့။ သူတို့နဲ့ ပလဲနံပတ်သင့်တဲ့ လူကပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရှိတယ်။ အကုန်လုံး အခွင့်ရေး မှန်သမျှက အစိုးရနဲ့ ပလဲနံပတ်သင့်တဲ့ လူတွေသာ လုပ်လို့ရတဲ့ စနစ်ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီ စနစ်က ဒီကနေ့အထိ မပျောက်သေးပါဘူးတဲ့။ နောက် စီးပွားရေးတွေ ပိတ်စို့မှုတွေ ဖွင့်လိုက်လည်း ပျောက်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ လူထုက ညဉ်းတွားနေကြတာပါ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြောင်းအလဲ လမ်းစတွေဟာ အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို လိုချင်လို့။ Derek Mitchell စတဲ့ နိုင်ငံခြား သံတမန်တွေရှေ့ မှာ။ နိုင်ငံတကာရှေ့ မှာ မျက်နှာပန်းလှချင်လို့ ဖွင့်ပေးတယ်။ ဖွင့်ပေးတဲ့ ပုံစံမျိုး လုပ်ပြတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း စနစ်တရပ်ဟာ ဘာကြောင့်ပဲလုပ်လုပ် အပြောင်းအလဲတရပ်ကို စတင်ပြီးရင် တကယ်လို့ အဲဒီအပြာင်းအလဲရဲ့  ကောင်းကျိုး၊ အကျိုးအမြတ်တွေကို ပိတ်စို့ထားတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင် နားလည်းသဘောပေါက်ခဲ့ရင် ရရှိထားတဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို ပစ်ပယ်ပြီး မူလနေရာဟောင်းကို ပြန်သွားတက်ပါသလားဆိုတာကို နောက်တကြိမ်မှာ ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ အငြင်းပွား နယ်မြေကိစ္စ နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးကသာ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိ
ကြာသပတေး, 22 စက်တင်ဘာ 2011
“ကိုယ့်အတ္တနဲ့ယှဉ်ပြီး လူထုဒုက္ခရောက်မယ့်အလုပ် မလုပ်စေချင်ဘူး”
ဧရာဝတီ Thursday, 22 September 2011 13:59 အင်တာဗျူး
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းအား စာရေးဆရာများ၊ စာနယ်ဇင်းသမားများ၊ ကဗျာဆရာများ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပညာရှင်များနှင့် နားလည်သည့် လူထုက ကန့်ကွက်လျှက် ရှိချိန်တွင် ကာတွန်း ဟာဂျူလီ (ကသာ) သည်လည်း မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း ကန့်ကွက်သည့် ကာတွန်းများ ဆက်တိုက် ရေးဆွဲကာ ၎င်း၏ facebook စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြလျှက် ရှိသည်။ ကာတွန်း ဟာဂျူလီ (ကသာ) သည် မြစ်ကြီးနား အောက်ဘက် ကသာမြို့နယ် ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင် နေထိုင်သူ ဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီမြစ်၏ အပြောင်းအလဲများကို မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ ကြုံနေရသူ ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတတ်မြောက် ထားသည့် ကာတွန်းပညာ အသုံးပြုကာ ဧရာဝတီမြစ်ကို တတ်အားသရွေ့ ကာကွယ် ချင်သည်ဆိုသော ကာတွန်းဟာဂျူလီ (ကသာ) အား ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်း သတင်းထောက် အေးချမ်းမြေ့က ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားပါသည်။
ကာတွန်း ဟာဂျူလီ (ကသာ)
ဟာဂျူလီ (ကသာ) သည် မြန်မာ စာနယ်ဇင်းများတွင် ကာတွန်းများကို အနှစ် ၂၀ ကျော် တောက်လျှောက် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး လက်ရှိလည်း ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်းပါးများအား ဂျာနယ်များတွင် ရေးသားနေသူ ဖြစ်သည်။
မေး။ ။ ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းနံဘေး ကသာမြို့မှာ နေနေတဲ့ ကာတွန်းဆရာ တယောက်အနေနဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လောက်အထိ နားလည်ထားလဲ။
ဖြေ။ ။ ကသာက ဧရာဝတီရဲ့ မြစ်ဖျားကိုး၊ မြစ်ကြီးနား မြစ်ဆုံနဲ့ ဘာမှမဝေးဘူးလေ။ မြစ်ကြီးနားမှာ ဒီနေ့ရေကြီးရင် နောက်နေ့ ကသာမှာ ရေကြီးမှာ။ မြစ်ကြီးနား ဒုက္ခရောက်ရင် ကသာ ဒုက္ခရောက်မယ်။ ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းတလျှောက်မှာ နေတဲ့သူတွေ ဒုက္ခရောက်ကြမယ်၊ လူတွေ သေကြမယ်။ ဒါ ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာပေါ့။ ဒီဆည်ကြီးရဲ့ အမြင့်ပေနဲ့ အကျယ်က နည်းတာ မဟုတ်ဘူး၊ မြစ်ရေရဲ့ ၇ ရာခိုင်နှုန်းပဲ သုံးမယ်လို့ ဝန်ကြီးကပြောပေမယ့် ဒါ မသေချာဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရေစီးရေလာတွေ ပြောင်းသွားမယ်၊ ရေစူး တိမ်သွားမယ်၊ တချို့နေရာတွေဆို ကောသွားမယ်၊ တချို့ဆို မြစ်ကြောင်း ကျဉ်းသွားမယ်၊ ကျနော်တို့ အထက်ပိုင်း ဗန်းမော်တို့၊ ကသာတို့ ဆိုတာက မြစ်ကိုအားကိုးပြီး ရေကြောင်းခရီး သွားနေကြရတာကိုး။ သင်္ဘောတွေ၊ မော်တော်တွေ မသွားနိုင်ရင် ကျနော်တို့ အထက်ပိုင်းက လူတွေ ဒုက္ခရောက်မယ်။
ဒါပေမယ့် အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အဲဒီလို ဒုက္ခရောက်နိုင်တာတွေကို ဒီအထက်ပိုင်းက လူထုက မသိဘူး၊ နားမလည်ကြဘူး။ စားဝတ်နေရေး လုံးပန်းနေရတော့ အဲဒီလောက်ထိ မတွေးနိုင်ကြဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ မီဒီယာကနေ ဒါကို ပြောရမယ်။ မီဒီယာ ဆိုတာက အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ကာတွန်းဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ သူတို့က တတ်နိုင် သလောက် စည်းရုံးရမယ်။ ဒါကြီးဖြစ်သွားရင် ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ လှုံ့ဆော်ရမယ်။ ကျနော်တို့ အထက်ပိုင်းမှာ ဒါလေးတွေ ဗဟုသုတ ပြောဖို့ နည်းနေသေးတယ်။ ကျနော်ကတော့ အဲဒါကို တတ်နိုင်သလောက် ပြောတာပေါ့။ စားဝတ် နေရေး ကျပ်တည်း နေတော့ ဗဟုသုတအရာမှာ အတော်အားနည်းတယ်။ သူတို့မှာစိုးရိမ်စရာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို သဘောမပေါက်ကြဘူး။ ဒီကောင်ကြီးက အန္တရာယ်ရှိတယ်၊ အထက်ပိုင်းကလူတွေအတွက် ပိုပြီး အန္တရာယ်က နီးတယ်။ ဒါကို သူတို့သိအောင် ပြောရမယ်၊ စည်းရုံးရမယ်၊ ရေးသားရမယ်ပေါ့ဗျာ။
နောက်တချက်က ဒီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကိစ္စ ပြောတယ်၊ ဆိုတယ်၊ ရေးသားနေတယ် ဆိုတာ အမျိုးသားအရေး အတွက် ပြောတာ၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုတာကို လူထု သဘောပေါက်အောင် ပြောဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အားလုံးဝိုင်းကြ ဝန်းကြဖို့ လိုတယ်။
မေး။ ။ မြစ်ဆုံ ကာတွန်းတွေကို facebook ပေါ်မှာပဲ တင်တာလား။ ပြည်တွင်းက ဂျာနယ်တွေမှာ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာကော ဖော်ပြလို့ မရဘူးလား။
ဖြေ။ ။ ဂျာနယ်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ဖော်ပြလို့မရပါဘူး။ ကျနော့် facebook မှာပဲတင်တာပါ။ အဲဒီက တဆင့်ယူသုံး ကြတာတော့ ကျနော်လည်း မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။ ဒီလို လူမှုကွန်ရက်တွေ ပေါ်လာတော့ အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုကောင်းလာတယ်။ ကျနော်ဆို ကာတွန်းရေးလာတာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ပြီ။ ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာဆို နည်းနည်းလေး တွေးစရာပါလာရင် အဖြုတ်ခံရတာပဲ။ အဲဒါကြောင့် ကျနော် ကာတွန်း မဆွဲချင်တော့ဘူး။ စိတ်ပျက်ပြီး ကာတွန်းမဆွဲတာတောင် ကြာပြီ။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း facebook လိုမျိုးတွေ ပေါ်လာတော့ ကျနော် ကာတွန်းဆွဲဖြစ်တယ်။ နေ့တိုင်းလိုလိုကို ဆွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာတွေ ပေါ်လာတာကို ကျေးဇူးတကယ် တင်တယ်၊ လွတ်လပ်တဲ့ နေရာလေး တခုလို ခံစားရတယ်။
မေး။ ။ ဧရာဝတီ မြစ်ဘေးမှာ နေပြီး ဒီအကြောင်းကို မြင်နေ၊ တွေ့နေ၊ ပိုသိနေတဲ့ လူတယောက် အနေနဲ့ ဒေသခံ လူထုက ဒီဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည် ကိစ္စ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ ပိုသိလာဖို့ ဘာတွေလုပ်နိုင်မယ် ထင်သလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ကတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပဲ ထိုင်ထိုင်၊ ဘယ်မှာပဲ ထိုင်ထိုင် ဒီစကားပြောဖြစ်တယ်။ ဘယ်လောက်ထိ အန္တရာယ်ဖြစ်နေပြီ၊ ဒါကြီးပြီးသွားရင် ငါတို့ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုတာတော့ တတ်နိုင်သလောက် ပြောနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ စာရေးဆရာ၊ ကာတွန်းဆရာတွေ ဆိုတာကလည်း အပေါင်းအသင်းက နည်းနည်း ကျယ်ပြန့်တာကိုး။ အဲဒီတော့ ကိုယ် နိုင်သလောက်လေးတွေ ပြောရင်းနဲ့ လူတွေ အများကြီး သိသွားနိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီဘက် အထက်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့၊ ဒီဘက် ထီးချိုင့်၊ ရွှေဘို၊ ဗန်းမော်၊ ကသာ၊ကာတွန်းဆရာတွေ၊ ကဗျာဆရာတွေ၊ စာရေးဆရာတွေကိုလည်း ပြောချင်တယ်၊တတ်နိုင်သလောက် ဒီ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည် အကြောင်း ကိုယ့်လူထုကို ပြောကြစမ်းပါလို့ ကျနော် တိုက်တွန်းချင်တယ်။
မေး။ ။ အခုက မြစ်ဆုံဆည် ဆောက်တော့မယ်ဆိုပြီး ကန့်ကွက်တဲ့သူတွေ များလာတယ်၊ သိတဲ့သူလည်း ပိုများလာတယ်။ ဒါပေမယ့် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးပေါ်မှာ တံတားတွေ အများကြီးဆောက်တာတို့၊ ရွှေကျင်တာတို့၊ မြစ်ဘေးက သစ်တောတွေ ခုတ်တာတို့ကြောင့် မြစ်က စပျက်စီးနေပြီမဟုတ်လား။ သာမန် လူတယောက်အနေနဲ့ ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ ဒီ ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ အပြောင်းအလဲ တွေကို သိသလောက် ပြောပြနိုင်မလား။
ဖြေ။ ။ အပြောင်းအလဲတွေက အများကြီးပဲ။ ဂျာနယ်တွေမှာလည်း ကျနော် ဆောင်းပါးတွေ ရေးဖူးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က ဆိုရင် တနှစ်တည်းမှာ ဧရာဝတီလင်းပိုင် ၆ ကောင်သေတယ်။ လင်းပိုင် သေရခြင်းအကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေပြီးရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီ လင်းပိုင်တွေက ကျောက်မြောင်းနဲ့ ရွှေဘိုကြားမှာနေတာ။ ဧရာဝတီမှာပဲ နေကြတာ။ နိုင်ငံခြား သားတွေ လာလာကြည့်ရတဲ့ အကောင်တွေပေါ့။ အဲဒီကောင်တွေ သေတဲ့အချိန်က ဆင်းခန်း ဆိုတဲ့ရွာကနေ ဧရာဝတီ မြစ်ကူးတံတား ဆောက်နေတာ၊ ဗန်းမော် - ကသာ ရထားလမ်း ဖောက်နေတဲ့ အချိန်ပေါ့။
လင်းပိုင်သေရခြင်းက အများကြီးရှိတယ်။ အသံဆူညံမှု ကြောင့်လည်း သေနိုင်တယ်၊ ရေအပြောင်းအလဲ၊ အပူအအေး ကြောင့်လည်း သေနိုင်တယ်၊ ရေထု ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်လည်း သေနိုင်တယ်၊ ကျနော်တို့က ဘာကြောင့်သူတို့သေတယ် ဆိုတာ ရှာနိုင်မှ ဧရာဝတီမှာ ဘာတွေပြုပြင်သင့်တယ် ဆိုတာသိမယ်။ ကျနော်အဲဒါတွေ ရေးပေမယ့် ဘယ်သူကမှလည်း မပြင်ကြပါဘူးဗျာ။ နောက် ရွှေကျင်နေတဲ့သူတွေသုံးနေတဲ့ ဆိုင်ယာနိုက် ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါ အင်မတန်ပြင်းတဲ့အဆိပ်ပဲ။ ဆိုင်ယာနိုက်သုံးပြီး ရွှေဖမ်းတဲ့ကိစ္စတွေ ကျနော်တို့ တလျှောက်လုံး ရေးလာတယ်။ ၁၀ ပုဒ်မှာ တပုဒ်လောက်တော့ ဖော်ပြခံရတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ပြုပြင်တာတော့ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ကျနော် တော်တော်လေး ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဧရာဝတီကနေ ရေလမ်းနဲ့လာတော့ သင်္ဘောပေါ်မှာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသား တယောက်နဲ့ ကျနော်တွေ့တယ်။ သူပြောသွားတာ လေးက တော်တော်လေး သတိထားဖို့ ကောင်းတယ်။ သူပြောတာက သူတို့ ဒိန်းမတ်မှာ အရင်က မြစ်တခုရှိတယ်။ အခု ဧရာဝတီလိုပဲတဲ့၊ အဲဒီမြစ်ကို မထိန်းသိမ်းခဲ့လို့ မြစ်ကောသွားတယ်၊ ရေချိုးဖို့တောင် မြစ်က မကျန်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီမြစ်ကြီးကို အခု ပြန်ထိန်းသိမ်းနေပြီ ပြုပြင်နေပြီ၊ နောက်နှစ်ပေါင်း ၂၀၊ ၃၀ လောက်ဆို အရင်အတိုင်း ပြန်မြင်ရတော့မယ်တဲ့။ အဲဒါလည်း ကျနော်ရေးဖူးတယ်။
နောက်တခု ဧရာဝတီမှာ ဖြစ်နေတာက လောင်စာ သင်္ဘောတွေပေါ့။ ကသာကနေ အထက်ပိုင်းကို သွားနေတာတွေ။ ကသာမှာ ဆီသိုလှောင်တဲ့နေရာရှိတယ်။ အဲဒီကို ဆီသင်္ဘောတွေ အများကြီးပဲဝင်တယ်။ အဲဒီတော့ မြစ်ပြင်မှာ ဆီယိုဖိတ်မှုတွေပေါ့၊ မြစ်ထဲမှာ ဆီတွေကို ပွနေတာပဲ။ ဧရာဝတီမြစ် ကမ်းနားတလျှောက်ဆိုရင် ဆီဝေ့နေလို့ အဝတ်လျှော်လို့တောင် မရဘူး။ ညစ်ပတ်နေတယ် ပေါ့ဗျာ။ အဓိကက သွားလာနေတဲ့ ကုမ္ပဏီသင်္ဘောကြီးတွေ ကြောင့်ပေါ့။ သူတို့ စည်းကမ်းမရှိလို့ပေါ့။
ကျနော်တို့ မြစ်ရေကတော့ သောက်ရေအဖြစ်က မသုံးသလောက်ကို ရှိသွားပြီ။ အရင်ကတော့ သောက်တယ်။ အခုတော့ သုံးရေလောက်ပဲ၊ နောက်တော့ ချိုးတယ်။ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းတွေမှာ အဝီစိတွင်းတူးတယ်၊ အဲဒီရေကိုတော့ သုံးတယ်ပေါ့။
မေး။ ။ အခုန ပြောသွားတာက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အနေနဲ့ ထိခိုက်မှုတွေဆိုရင်၊ လူမှုဘဝ ထိခိုက်မှု အနေနဲ့ကော။ ဘာတွေရှိလဲ။
ဖြေ။ ။ လူမှုရေး အခက်အခဲတွေ ရှိတာပေါ့။ ရေလမ်းပေါက်နေတဲ့ နေရာ ရေလမ်း မပေါက်တော့ဘူးဆိုရင် ဒါက အခက်အခဲ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေက နယ်စွန်နယ်ဖျားမှာ ဖြစ်နေတယ်၊ ဧရာဝတီမြစ်ဘေးမှာတော့ ဒါမျိုး သိပ်မရှိသေးဘူး၊ လူသိပ် မသိသေးဘူး။ နောက်တခုက ကမ်းပါးပြိုတာပေါ့။ ကမ်းပါးပြိုလို့ ရွာတွေပါသွားတာ ကျနော်တို့ ကသာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နှစ်တိုင်းလိုပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကဆို ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ ဘုရားတွေ ပါသွားတယ်။ အဓိကကတော့ မြစ်ကြောင်းတွေ ပြောင်းကုန်တာကြောင့်ရယ်၊ ထိမ်းသိမ်းမှု အားနည်းလို့ရယ်ပေါ့။ နောက် သစ်တောတွေ ပြုန်းကုန်လို့။ ရွှေကျော ရှာနေတဲ့ သူတွေဆိုရင် ဧရာဝတီ မြစ်ထဲက ရေတွေကို ရေစုပ်စက်ကြီးတွေနဲ့ တောင်ပေါ် ဆွဲယူတယ်။ တောင်ပေါ်မှာ မျှောစိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ တောင်ကမ်းပါးရံ မှာ ရှိနေတဲ့ မြေတွေ၊ သစ်ပင်တွေအကုန်လုံး မြစ်ထဲပါသွားတယ်။ အဲဒီမှာ မြစ်ကြောင်းတွေ ပြောင်းကုန်တယ်။ တခြားနေရာမှာ မြေပြိုတာတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ဒါတွေက မြင်နေရတာပဲ။ ဘယ်သူမှလည်း ဒါတွေကို မတားပါဘူး။ ဒါတွေက နှစ်တိုင်း ဖြစ်နေတာပါ။
ကျနော့်အနေနဲ့ မြစ်ဆုံဆည် ဆောက်နေတဲ့ နေရာကိုတော့ မရောက်ဖူးသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပညာရှင်တွေ ပြောနေတာတွေ ကြားရတယ်၊ ဖတ်ရတယ်။ ဒီဧရာဝတီမြစ်ဘေးမှာ နေနေတဲ့သူဆိုတော့ ကြားတာနဲ့တင် ကြက်သီးထတယ်။ ပုံမှန်အချိန် မိုးကြီးတဲ့ ရာသီမှာတောင် ဒီနေ့ မြစ်ကြီးနားမှာ ရေကြီးရင်၊ နောက်နေ့ ကသာမှာ ရေကြီးတာလေ။ ဒီနေ့ ဟိုမှာ ရေကျရင် နောက်နေ့ ကသာမှာ ရေကျတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ ရေလှောင်ကန်ကြီး တခုခုဖြစ်လို့ မြစ်ကြီးနား ရေမြုပ်ရင် နောက်နေ့ ကသာမှာ ရေမြုပ်မှာပဲ။ ဒုက္ခရောက်ကြဦးမယ်။
ကျနော်ကတော့ ဆည်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ရင် တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်တတ်တဲ့ ပညာနဲ့ တားဆီးသွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ် ထားတယ်။
မေး။ ။ တဦးချင်းအနေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်တဲ့အပြင် ဒီ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည် ကန့်ကွက်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေ၊ အနုပညာရှင်တွေ၊ စာပေပညာရှင်တွေနဲ့ ဘယ်လို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေ ရှိလဲ။ ဒေသခံတွေကို ပညာပေးတာမျိုးကအစ ဘာတွေ လုပ်နိုင်မယ်ထင်လဲ။ ဘယ်လို ဖြစ်စေချင်လဲ။
ဖြေ။ ။ မြစ်ဆုံဆည် ကန့်ကွက်တဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့ ကျနော်နဲ့က နည်းနည်းတော့ အဆက်ပြတ် နေတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် တခါတော့ သူတို့ ကသာကို လာတယ်။ သူတို့နဲ့ ကျနော်နဲ့ တွေ့တယ်။ တကယ်တမ်း လူထုကို တန်ဖိုးရှိရှိ ထိထိရောက်ရောက် ပညာပေး တာမျိုးတော့ ဖြစ်စေချင်တယ်ဗျာ။ အပျင်းပြေ လင်းပိုင်ကြည့်ရုံ သက်သက်ထက် ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ ဒေသခံတွေကို ပညာပေးစေချင်တယ်။ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ဝေမယ်၊ ဟောပြောမယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ ဟာတွေကို ရေးပြီး မော်တော်ပေါ်မှာ ပြောမယ်၊ စာကပ်မယ်ပေါ့။ အဲဒါမျိုးတွေ လုပ်စေချင်တယ်။
အဲဒီတုန်းက သူတို့အဖွဲ့လာတုန်းကဆို ရုပ်ရှင်မင်းသား ရဲတိုက် ပါတယ်ဗျ။ ရဲတိုက်ဆိုရင် နယ်တွေက၊ ရွာခံတွေက အရမ်းကို သဘောကျ နေကြတာ။ အဲဒီတော့ ရွာတွေမှာ ရဲတိုက်ရဲ့ မျက်နှာ ပြမယ်ဗျာ၊ သူတို့ လွယ်လွယ်ကူကူ လိုက်နာလို့ရမယ့် အချက်ကလေးတွေကို ပြောပြမယ်ဆိုရင် ပိုထိရောက်မယ် ထင်တယ်ဗျ။ ပရိသတ် သိတဲ့သူ တယောက်ယောက်က ပြောရင် ပိုထိရောက်မှာပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ - ကျနော်ပြောတယ် ဆိုရင် အခွန်း ၁၀၀ ပြော၊ တခွန်း နားထဲရောက်ဖို့ မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့လို နာမည်ရှိတဲ့သူ တယောက်က ပြောလိုက်ရင် တခွန်းပြော၊ တခွန်း နားထဲကို ဒိန်းကနဲ ရောက်မယ်လေ။ အဲဒီတော့ သူတို့နဲ့ ပူးပေါင်းနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်။ ကျနော်တို့ ဒေသခံ မီဒီယာ သမားတွေကလည်း တတ်နိုင်သလောက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မယ်၊ ကူညီပေးမယ်၊ သူတို့ကလည်း အဲဒီလို နာမည်ရှိပြီး ပရိသတ် သိတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ ပညာပေးမယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းတာပေ့ါဗျာ။
မေး။ ။ ကာတွန်းဆရာ တယောက်၊ မြစ်ကမ်းဘေး မြစ်ညာက ဒေသခံ တယောက်အနေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေကို တခုခု ပြောခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘာပြောချင်လဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော် ပြောချင်တာ ရှိတယ်ဗျ။ ကမ္ဘာမှာ ထင်ရှားတဲ့မြစ်ကြီးတွေ ရှိတဲ့ထဲမှာ ဒီ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးလည်း ပါတယ်။ မြစ်တစင်းက တနိုင်ငံလုံးနဲ့ သက်ဆိုင် နေတယ်ဆိုတာ ဒီ ဧရာဝတီပဲ ရှိတာ။ ဒီတော့ ဒီဧရာဝတီမြစ်ကြီးက တန်ဖိုးရှိတယ်၊ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ ဂုဏ်ယူရတဲ့ မြစ်ကြီး။ ဒါကို ကျနော်တို့ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်၊ သားစဉ်မြေးဆက် ထိမ်းရမှာ။ ဒါကို အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား ဆိုတာနဲ့ ဗန်းပြ ကိုင်ပေါက်ပြီး ပြောနေတာကတော့ ကျနော်တို့ လက်သင့်ခံလို့မရဘူး။
သူတို့က အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားလို့ ပြောတယ် ဆိုရင် လူထုက ဘယ်လောက်အထိ အကျိုးစီးပွား ရှိမှာလဲ။ တကယ်တမ်း သူတို့ ပြောသလို ဆိုရင် ကျနော်တို့က ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရမှာလေ၊ တရုတ်ကြီးက ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းယူသွားမှာ။ ဒါကြီး အောင်မြင်သွားရင် တိုင်းပြည်က တိုးတက်သွားမလား၊ ဖွံ့ဖြိုးသွားမလား၊ ခေတ်မီ နိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်သွားမလား၊ မဖြစ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ဒီကရတဲ့ အသီးအပွင့်က ဘယ်သူတွေစားရမလဲ၊ ဒါတွေ လူတိုင်းလည်းသိနေတာပဲ။
ကျနော်တို့ လုပ်နေတာ နိုင်ငံရေး မဟုတ်ဘူး၊ အမျိုးသားရေး ဆိုတော့ မောင်နီအစိုးရ ဖြစ်စေ၊ မောင်ဖြူ အစိုးရဖြစ်စေ လူထု အန္တရာယ် ဖြစ်စေမယ့် လုပ်ရပ်မျိုးကို ပြောရမှာပဲ။ အဲဒီလို ပြောတဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံရေး လုပ်နေတယ်ဆိုပြီး လက်ညှိုး မထိုးစေချင်ဘူး။ မြစ်ဆုံဆည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အန္တရာယ်ဖြစ်လာရင် NLD လည်း ဖြစ်မှာပဲ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးလည်း ဖြစ်မှာပဲ၊ စစ်တပ်လည်း ဖြစ်မှာပဲ၊ KIO၊ KIA လည်းဖြစ်မှာပဲ။ ဒါ အမျိုးသားအားလုံးနဲ့ ဆိုင်တယ်။ မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကြီး ပျက်သွားလို့လည်း ဒီအစိုးရ ပြုတ်ကျ သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို ဘာလို့လုပ်ချင်နေရတာလဲ။
ကျနော်ပြောချင် တာကတော့ ကိုယ့်အတ္တနဲ့ယှဉ်ပြီး လူထုဒုက္ခရောက်မယ့် အလုပ်မျိုးတွေ မလုပ်ကြဖို့ တောင်းပန်ချင်တာပါ။ ဒါပါပဲ။ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား မဟုတ်ဘဲ၊ တရုတ် အကျိုးစီးပွားပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ လူထုဆန္ဒကို တောင်းဆိုနေတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒါကိုတော့ လက်လျှော့ပေးပါလို့ ပြောခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင် ပြောချင်တယ်ဗျာ။ ။
“ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ပါ” အမည်ရှိ အနုပညာရှင်များ၏ ပြပွဲ
ဒေါ်​အောင်ဆန်း​စုကြည်ရဲ့​ ​ပြောစကား​ ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ အငြင်းပွား နယ်မြေကိစ္စ နိုင်ငံတကာ ခ...
“ကိုယ့်အတ္တနဲ့ယှဉ်ပြီး လူထုဒုက္ခရောက်မယ့်အလုပ် မလုပ်...